MYO AUNG SEARCH ENGINE: 04/01/2010 - 05/01/2010
Biblical Giants(Remains) found in Greece
Remember the old testament story of how the Israelites were afraid because of the GIANTS in the land of Canaan.
Posted by leoninedragon at 10:12 PM No comments:
ကင်းဝန်မင်းကြီး-From Myanmar Online Encyclopedia
မြန်မာ ဘုရင်တို့၏ သက်ဦးဆံပိုင် အုပ်ချုပ်သော စနစ်ကို ခေတ်နှင့် အညီ ပြုပြင် ပြောင်းလဲကာ အနောက်တိုင်း နိုင်ငံများကဲ့သို့ အစိုးရ ၀န်ကြီးအဖွဲ့ဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်သစ်ကို လိုလားသူ ကင်းဝန်မင်းကြီး ဦးကောင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းတွင်သာမက မြန်မာ စာပေတွင်လည်း အထူးပင် ထင်ရှားလှသော ပညာရှိ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်၏ နောက်ဆုံး မင်းဆက်များ ဖြစ်ကြသော မင်းတုန်းမင်းနှင့် သီပေါမင်းတို့၏ လက်ထက်တွင် နိုင်ငံ့တာဝန်ကို စွမ်းစွမ်းတမံ ထမ်းရွက်ကာ ထင်ပေါ် ကျော်ကြားလှသော သတိုးမင်းကြီး မဟာမင်းလှစည်သူ ဘွဲ့ခံ ကင်းဝန်မင်းကြီးမှာ ဗြိတိသျှတို့ အထက် မြန်မာပြည်ကို သိမ်းပိုက် ပြီးစဉ် ခေတ်က လူသိအများဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်ကို မသိသူအချို့က “ ဦးကောင်းလိမ်ထုတ် သီပေါပြုတ် ” ဟူသော စာအရ ကင်းဝန်မင်းကြီးသည် အထက်မြန်မာပြည်ကို ဗြိတိသျှတို့လက်သို့ လက်သိပ်ထိုး အပ်ခဲ့သည်ဟု အယူမှားကာ သိနားလည် ခဲ့ကြသည်။
အမှန်မှာ ကုန်းဘောင်ခေတ်နောက်ပိုင်းတွင် ခေတ်မမှီပဲ နောက်ကျကျန်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံကို ခေတ်မှီတိုးတက်လျက်ရှိသော အခြား နိုင်ငံတို့နှင့် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်အောင် စီမံအုပ်ချုပ်ရေး ၊ တရားစီရင်ရေး ၊ နိုင်ငံခြား ဆက်သွယ်ရေး ၊ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးတို့ကို အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ရှေးမြန်မာကြီးများတွင် ကင်းဝန်မင်းကြီးသည် ထင်ရှားစွာ ပါဝင်ခဲ့လေသည်။
ယခု ပုလဲနှင့် ဆားလင်းကြီး မြို့နယ်များ ဖြစ်သော ဗန့်ကျီတိုက်နယ် ၊ မင်းတိုင်ပင်ရွာဇာတိ ဖြစ်၍ အဖမှာ အတွင်းခြောက်စု နတ်သျှင်ရွေးတပ်တွင် အမှုထမ်းသော သွေးသောက်ကြီး ဦးမှို ၊ အမိ ဒေါ်နှင်းဆီတို့မှ ၁၁၈၃ ခု ၊ တပို့တွဲလဆန်း (၁၂) ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ ငယ်မည်မှာ မောင်ချင်းဖြစ်၍ ညီအစ်ကို မောင်နှမ (၇) ယောက်အနက် ဒုတိယသား ဖြစ်သည်။ အသက် (၇) နှစ်တွင် ငှက်ပျောတော ကျောင်းထိုင်ပုဂ္ဂိုလ် ခင်ကြီးစံထံတွင် ပညာသင်ကြား၍ အသက် (၁၀) နှစ်တွင် ရှင်သာမဏေ ဖြစ်သည်။ မိမိဖခင်၏ တပ်တွင် အမှုထမ်းရန် တာဝန်ရှိသော်လည်း သာသနာ့ဘောင်သို့ တက်ရောက်သဖြင့် စစ်မှု မထမ်းခဲ့ရပေ။ ရဟန်းဘွဲ့မှာ ဦးအာလောက ဖြစ်သည်။ ကိုရင် ဘ၀နှင့် ရဟန်းဘ၀တို့တွင် စာပေ ပရိယတ္တိတို့၌ လွန်စွာ စိတ်အား ထက်သန်၍ ရဟန်းခံပြီး မကြာမီအတွင်း အမရပူရမြို့ သာသနာပိုင် ဗားကရာ ဆရာတော်၏ ကျောင်းတိုက်တွင် သတင်းသုံးခဲ့သည်။
ပုဂံမင်းလက်ထက်တွင် လူထွက်ပြီင်္းနောက် သက္ကရာဇ် ၁၂၁၁ တွင် မင်းတုန်းမင်းသား၏ အိမ်တော်တွင် စွဲမြဲ ခစားသည်။ အိမ်ရှေ့မင်း၏ မင်္ဂလာအိမ်တော် ဘဏ္ဍာစာရေး ရာထူးဖြင့် အမှုထမ်းနေစဉ် မောင်ချင်းအမည်မှ မောင်ကောင်းဟု အမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး နန်းတက်တော် မူသောအခါ စစ်ကိုင်းမြို့နယ် ရွာသစ်ကြီးရွာကို စားရ၍ ရွှေတိုက်စိုး အဖြစ် အမှုထမ်းရသည်။
ထို့နောက် လွှတ်တော်တွင် အမှာတော်ရေး ရာထူုးကို ဆက်လက်ထမ်းရွက်စဉ် ပုဂံမင်း၏ မိဖုရား (ကိုယ်လုပ်တော်) တစ်ဦးဖြစ်သော ဆင်ကြန်သခင်နှင့် လက်ဆက်ခဲ့သည်။
တာဝန်များကို အရည်အချင်းရှိစွာနှင့် ကျေပွန်စွာ ထမ်းရွက်နိုင်သောကြောင့် ၁၂၂၃ ခုနှစ်တွင် အလုံဝန်အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရ၍ အလုံမြို့သို့ ရွှေ့ပြောင်းအမှုထမ်းရသည်။ အလုံနယ်မှာ စစ်သူကြီး မဟာဗန္ဓုလ မွေးဖွားကြီးပြင်းရာ ဒေသ ဖြစ်သည်သာမက ရှေးမြန်မာ တပ်မတော်အတွင်း ခြောက်စုတပ်များတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသော စစ်သူရဲကောင်းများ ပေါ်ထွက်ရာ ထင်ရှားသည့် ဒေသဖြစ်သည်။ အလုံမြို့ဝန်အဖြစ် အမှုထမ်းရွက်စဉ် စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း ၊ တရားစီရင်ခြင်းတို့တွင် အထူး အောင်မြင်သည့်အလျောက် အလုံဝန်အဖြစ် ဦးကောင်း၏ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် တရားစီရင်မှုအာဏာ တို့ကို လွှတ်တော်ကသာ ပြင်ဆင်ပယ်ဖျက်နိုင်သည်ထိ အခွင့်အရေး ရရှိခဲ့သည်။ ဤသို့ ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း စာပေ ၀ါသနာ ပါသည့်အလျောက် ပြုစုရေးသားခဲ့သဖြင့် နေပြည်တော်၌ပင် ကျော်ကြားခဲ့သည်။ အလုံမြို့ဝန်အဖြစ်နေစဉ် အလုံမြို့သူကြီး ဦးအို ၏နှမ မရွှေမေနှင့် လက်ဆက်ခဲ့သည်။
၁၂၂၈-ခုနှစ်တွင် မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင် အရေးအခင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့၍ အိမ်ရှေ့မင်း ကနောင်မင်းသား ကျဆုံးသဖြင့် မင်းတုန်းမင်းသည် အလုံဝန် ဦးကောင်းအား နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည် ခေါ်ယူတော်မူပြီးလျှင် မင်းကြီး မဟာစည်သူ ဘွဲ့နှင့် ၀န်ထောက်တော် ရာထူုးဖြင့် အပါးတော်၌ ခစားစေသည်။ အရေးတော် အေးငြိမ်းသွားသည့် အခါ၌ ကြည်းကင်း ၊ ရေကင်းစသည်တို့ကို အုပ်ချုပ်ရန် ၀န်ထောက် ကင်းဝန်ရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကင်းဝန်မင်းကြီးဦးကောင်းဟု ထင်ရှား ကျော်ကြားလာလေသည်။
ကင်းဝန်ဆိုသည်မှာ နေပြည်တော် ၊ မြို့ကြီး ၊ ရွာကြီးများတွင် အကာအကွယ် ၊ အစောင့်အရှောက်ထားသော ကင်းစစ်သည်တို့ကို အုပ်ချုပ် ခန့်ခွဲရုံသာ မဟုတ်သေး ၊ နယ်စပ်ဒေသတို့တွင် ကူးလူးဆက်သွယ် ရောင်းဝယ်နေကြသော ကုန်သည် ၊ ခရီးလမ်းတို့ကိုပါ အုပ်ချုပ်၍ အကောက်ခွန်များ စည်းကြပ်ရသည့် တာဝန်လည်း ပါဝင်လေသည်။
၁၂၃၂-ခုနှစ်တွင် အောက်မြစ်စဉ် မြို့ရွာများမှာ အင်္ဂလိပ်ပိုင် နယ်မြေနှင့် နီးစပ်ယှက်တင်နေ၍ ဆက်သွယ်မှု ပြေပြစ်လျက် ရာဇ၀တ်ရေး ကင်းလွတ် လုံခြုံအောင် ကင်းဝန်မင်းကြီးကို ထိုမြစ်စဉ်ရှိ ၀န် ၊ စစ်ကဲ ၊ အကြီးအအုပ် စသူတို့ကို ကြီးကြပ် အုပ်ချုပ်ရန် ခန့်ထားခဲ့လေသည်။ ကင်းဝန်မင်းကြီးသည် မင်းလှမြို့မှနေ၍ ဤအရေးကြီးသော တာဝန်ကြီးကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ခဲ့လေသည်။
နိုင်ငံခြားသို့ သံအဖြစ် သွားရောက်ခြင်း
ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့် ပိုမိုရင်းနှီးစွာ တိုက်ရိုက် ဆက်ဆံနိုင်ရန် လည်းကောင်း ၊ ဥရောပတိုက်ရှိ အခြားနိုင်ငံများနှင့်လည်း နိုင်ငံခြား ဆက်သွယ်မှု ရရှိရန်အလို့ငှာ လည်းကောင်း ၁၂၃၃ ခုနှစ်တွင် မင်းတုန်းမင်း စေလွှတ်သော သံအဖွဲ့ကို ကင်းဝန်မင်းကြီး ဦးဆောင်၍ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ထိုသံအဖွဲ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဥရောပ နိုင်ငံများသို့ ပထမဆုံး စေလွှတ်ခဲ့သော သံအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
ဗြိတိန် ၊ အိုင်ယာလန် ၊ ပြင်သစ် နှင့် အီတလီနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ကာ နိုင်ငံ အစိုးရချင်း ဆက်သွယ်ရေး ၊ ကုန်သည်ကြီးများ ၊ ကုမ္ပဏီကြီးများ နှင့် စီးပွားရေး ဆက်သွယ်မှုများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အပြင် အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး ၊ ကာကွယ်ရေး တပ်များ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စီမံပုံတို့ကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။ ပညာသင်ကြားရေး ၊ ၀န်ထမ်းလုပ်ငန်း ၊ ငွေနှင့် ဘဏ်စနစ် ၊ ကြေးနန်းနှင့် စာတိုက်လုပ်ငန်း ၊ ပြဇာတ် ၊ ဇာတ်သဘင် စသည်တို့ကိုလည်း လေ့လာခဲ့သည်။ ထူးခြားသည်မှာ ပြင်သစ်အစိုးရနှင့် မဟာမိတ် စာချုပ်တစ်ခုကို ၁၂၃၄ ခုနှစ်တွင် ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဤသံအဖွဲ့၏ ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုဖြင့် ပြင်သစ်သံအဖွဲ့ မန္တလေးသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ၁၂၃၅ တွင် ကင်းဝန်မင်းကြီးပင် ဦးဆောင်၍ ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ မြန်မာသံအဖွဲ့ တစ်ဖွဲ့ ထပ်မံ သွားရောက်ခဲ့ရာ ဤအခေါက် သွားရောက်ခဲ့ခြင်းသည် ပြင်သစ် - မြန်မာ ဆက်ဆံရေးအတွက် များစွာ အကျိုးထူးဖွယ် ရှိသော်လည်း အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ ဆက်ဆံရေးကို များစွာ ဂယက်ရိုက်စေခဲ့သည်။
အုပ်ချုပ်မှု ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး
ကင်းဝန်မင်းကြီးသည် ဒီမိုကရေစီဝါဒ ထွန်းကားသော အနောက်နိုင်ငံများသို့ သွားရောက် လေ့လာခဲ့သည့်အတိုင်း မိမိနိုင်ငံ တိုးတက်ရေးအတွက် အနောက်နိုင်ငံများကဲ့သို့ ဘုရင်၏ အာဏာကို ကန့်သတ်ကာ ၀န်ကြီးအဖွဲ့နှင့် တိုင်းပြည် ရေးရာများကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည့် အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်တစ်ခု တီထွင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍လည်း မင်းတုန်းမင်းကြီး နတ်ရွာစံ သောအခါ မိမိ၏ သြဇာညောင်းမည့် သီပေါမင်းသားကို နန်းတင်ရန် သဘောတူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်.။ ၁၂၄၀ ပြည့်နှစ်တွင် သီပေါမင်း နန်းတက်ပြီးနောက် အုပ်ချုပ်မှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများကို စတင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော် အုပ်ချုပ်ရေးကို (၁၄) ဌာန ခွဲပြီးလျှင် ကင်းဝန်မင်းကြီးကမူ ကာကွယ်ရေး ဌာနဟူ ခေါ်ဆိုရမည့် ကြည်းတပ်ကို တာဝန်ယူ အုပ်ချုပ်ကာ နိုင်ငံတော်၏ ကာကွယ်ရေး ကို စီစဉ်ခဲ့လေသည်။
တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရာတွင်လည်း လွှတ်တော်တွင် အခွင့်အာဏာများ ပိုမို ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့လေသည်။ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတို့တွင် ဘုရင် ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း ၊ အ်ိမ်ရှေ့မင်းသော်လည်းကောင်း သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်မြဲ ဖြစ်သော်လည်း မြင်ကွန်း ၊ မြင်းခုံတိုင် အရေး ပေါ်ပေါက် ပြီးကတည်းက ထိုအစဉ်အလာများ ပျက်ပြားသကဲ့သို့ ရှိနေရာ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများတွင် ကင်းဝန်မင်းကြီးကသာ ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးသစ်မှာ ဘုရင်၏ အာဏာကို ကန့်သတ်ရန် ရှိနေသဖြင့် ကန့်သတ်ခြင်း မခံလိုသူတို့ဘက်မှလည်း အတိုက်အခံများ ပေါ်ပေါက်လာလေသည်။ သို့ဖြစ်၍လည်း သီပေါမင်း နန်းတက်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကင်းဝန်မင်းကြီးမှာ တန်ခိုးမှိန်ကာ ဆင်ဖြူမရှင် ဦးစီးသော တိုင်တား မင်းကြီးတို့က သြဇာ ထက်၍ လာလေသည်။ ဤသို့အားဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုများကို ကင်းဝန်မင်းကြီး စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ချေ။
ကင်းဝန်မင်းကြီးသည် ဗြိတိသျှတို့၏ ခြေလှမ်းကို ကောင်းစွာ ရိပ်မိသည့်အလျောက် နိုင်ငံခြား ဆက်သွယ်ရေး ကျားကွက် ရွှေ့မှု အောင်မြင်စေရန် ပြင်သစ်အစိုးရကို ကျားကောင် တစ်ကောင်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့လေသည်။ ထိုသို့ ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ဗြိတိသျှတို့နှင့် ပဋိပက္ခ မဖြစ်အောင် လိမ်မာပါးနပ်စွာ ဆက်ဆံရေး သိမ်မွေ့မှုများကို တစ်ဖက် တစ်လမ်းမှ ကြိုးစားခဲ့သည်.။ မင်းတုန်းမင်း လက်ထက် ဗြိတိသျှ ဝေလမင်းသား အိန္ဓိယသို့ ရောက်လာစဉ်က မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် သွားရောက် နှုတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှ ကုမ္ပဏီများနှင့် ဆက်သွယ်မှုတွင်လည်း မိမိအစိုးရ ငွေကြေးအပြင် ဗြိတိသျှ ကုမ္ပဏီတို့ ကျေနပ်အောင်လည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း ပြင်သစ်တို့မှာ အနည်းငယ် တန်ခိုး မှိန်နေချိန် ဗြိတိသျှတို့၏ နယ်ချဲ့စီမံကိန်း အရှိန်အလွန်ကောင်းနေချိန် ဖြစ်သည့်အပြင် မိမိ၏ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်များ ဖြစ်သည့် လွှတ်တော် ၀န်ကြီးတို့ကို မိမိအမြင်သို့ ပါအောင် ဆွဲဆောင် နိုင်စွမ်း မရှိခဲ့သဖြင့် ကင်းဝန်မင်းကြီူး၏ နိုင်ငံခြား ဆက်ဆံရေး မူဝါဒနှင့် လုပ်ငန်းမှာ မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ပြင်သစ်နှင့် မဟာမိတ် ဆက်သွယ်မှုများအား ဗြိတ်ိသျှ အစိုးရက ပြင်သစ် အစိုးရအား ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီး ပြင်သစ်တို့ အခြေမစိုက်မီ မြန်မာနိုင်ငံကို လက်ရ သိမ်းယူနိုင်ရန် ၁၂၄၇ ခုနှစ်တွင် အကြောင်းရှာ တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
အင်္ဂလိပ်တို့ ချီတက်လာစဉ်တွင် သီပေါမင်းအား လွတ်ရာသို့ ရှောင်တိမ်းကာ ပြန်လည် ခုခံရန် ကင်းဝန်မင်းကြီး အကြံပေးခဲ့လေသည်။ သို့ရာတွင် ဆင်ဖြူမရှင် မိဖုရားကြီး နာမကျန်း ဖြစ်ခြင်း ၊ သမီးတော်များ ငယ်ရွယ်ခြင်း စသည့် အကြောင်းများကြောင့် သီပေါမင်း ကိုယ်တိုင်က မထွက်ခွာလိုဟု ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဗြိတိသျှတို့ တောင်းဆိုသည်ကို ကျေအေးစွာ အပြည့်အစုံ ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ သတ္တ၀ါတို့ အသက်မသေစေရန် တိုက်ခိုက်မှု မရှိစေလိုကြောင်း အမိန့်ပေးသောကြောင့် အင်္ဂလိပ်တို့ ချီတက်လာရာတွင် ဟန့်တား တိုက်ခိုက်မှု မရှိရန် စီစဉ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် အမှန်တကယ် အင်္ဂလိပ်တို့ အလိုရှိနေသည်မှာ ကျန်ရှိနေသေးသော အထက်ဗမာပြည် တစ်ခုလုံး ဖြစ်သည် ဆိုသည်ကိုမူ ကင်းဝန်မင်းကြီးရော ၊ သီပေါမင်းပါ မသိရှိခဲ့ကြပေ။
ကင်းဝန်မင်းကြီး နိုင်ငံခြားသို့ သံအဖြစ် မသွားမီ အဂ္ဂမဟာ သေနာပတိ ၀န်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်း ခံရသည်။ သီပေါမင်း လက်ထက်တွင် သက်တော်ရှည်ဘွဲ့ ၊ သုဓမ္မဘွဲ့တို့ ရရှိခဲ့သည်။ နိုင်ငံခြားသို့ သွားရောက်စဉ်တွင် ပြင်သစ်သမ္မတက တံဆိပ် တစ်ခုနှင့် အီတာလျံ ဘုရင်က ရင်သိုင်းနှင့် တံဆိပ် တစ်ခုကိုလည်းကောင်း ၊ ၀ိတိုရိယ ဘုရင်မက CSI ဘွဲ့ထူုးဖြင့်လည်းကောင်း ချီးမြှင့်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
ပြုစုခဲ့သည့် ကျမ်း ၊ စာပေများ
ကင်းဝန်မင်းကြီး ပြုစုခဲ့သော ကျမ်းများမှာ မြန်မာ စာပေလောကတွင် များပြားလှသည်။ ကဗျာဘက်တွင် ရတု ၊ အိုင် ၊ ရကန် ၊ သဖြန် ၊ တေးထပ် ၊ ဧချင်း ၊ မော်ကွန်း ၊ လူးတား ၊ ပျို့ စသည်ဖြင့် မျိုးစုံကို ပြောင်မြောက်စွာ ရေးသားခဲ့သည်။ ထင်ပေါ်သော ကျမ်းများမှာ စကားပြေဖြင့် လန်ဒန်သွား ၊ ပြင်သစ်သွား နေ့စဉ် မှတ်တမ်းများ ၊ ဓမ္မသတ် (၃၆) စောင်ချုပ် ၊ အမွေမှု ဓမ္မသတ် ၊ အိမ်မှု ဓမ္မသတ် ကျမ်းနှင့် အခြား စာပေများ ဖြစ်သော တိဏ္ဍုကပျို့ ၊ ရတနာ နဒီ မော်ကွန်း ၊ ဓမ္မသတ် လင်္ကာများ ၊ အဍသံခေ ပ၀ဏ္ဏနာ ၊ ပကိဏ္ဏကဍ္ဓမ္မသတ် လင်္ကာတို့ ပါဝင်သည်။ ဂီတဘက်တွင် ယိုးဒယား ၊ ပတ်ပျိုး ၊ ဟန်ချင်းများ ရေးဖွဲ့ခဲ့လေသည်။
၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၇၉ ကင်းဝန်မင်းကြီး ဦးကောင်းက မြို့တော်အနောက်တောင် ကျောင်း တိုက်အတွင်း သားဖြစ်သူအား ရှင်သာ မဏေအဖြစ် သွတ်သွင်းချီးမြှင့် ကင်းဝန်မင်းကြီး၏ သားဆိုသူ မှာ သားအရင်းအချာမဟုတ်ဘဲ မွေး စားသားမျသာဖြစ်ပါသည်။ မင်းကြီး သည် ပထမ၀န်ကတော် ဆင်ကြန် သခင်နှင့်လည်းကောင်း၊ ဒုတိယ၀န် ကတော်ဒေါ်ရွှေမေနှင့်လည်းကောင်း သားသမီး မထွန်းကားခဲ့သဖြင့် ၀န် ကတော်ဒေါ်ရွှေမေ၏တူဖြစ်သူမောင် ကြာဥနှင့် မောင်ဘိုကြီးတို့အား သား များအဖြစ် မွေးစားခဲ့၏။ မောင်ကြာ ဥမှာ သီဗပါမင်းလက်ထက်တွင်မင်း လှနရာ ဇေတဗိုလ်ဘွဲ့ခံ အလုံမြို့ဝန် ဖြစ်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလိပ်ခေတ်တွင် အမရပူ ရမြို့အုပ် ဖြစ်လာခဲ့၏။ မောင်ဘိုကြီး မှာမူ ပုသိမ်ကြီးမြို့အုပ်အဖြစ် ခန့် အပ် ခံခဲ့ရ၏။ ယခု ရှင်သာမဏေအဖြစ် ချီး မြှင့်ပေးခဲ့သူ မင်းကြီး၏မွေးစားသား မှာ ကချင်တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ဟန်ရှိ ပြီး စစ်ထွက်သွားစဉ် သုံးနှစ်အရွယ် မိဘမဲ့ကလေးငယ်ကို တွေ့ရှိရရာမှ မင်းကြီးက မွေးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဆို၏။ ကလေးငယ် အရွယ်ရောက် လျင် မင်းကြီးက ရှင်သာမဏေ၀တ် ပေးခဲ့ရာ နောင် သာသနာ့ဘောင်၌ မွေ့လျော်သွားပြီး ရဟန်းဝတ်သွား ကြောင်း၊ ဘွဲ့မည်မှာ ဦးဓမ္မ ဖြစ် ကြောင်း ဆရာကြီးမြကေတုက ဆိုပါ သည်။ သာက၀န်ကျောင်းမှာ ကင်း ၀န်မင်းကြီးက သားဘုန်းတော်ကြီး ဦးဓမ္မအတွက် ဆောက်လုပ်လှူဒါန်း ပေးခဲ့ခြင်းဟုလည်း ဆို၏။ ကင်းဝန် မင်းကြီး ကွယ်လွန်စဉ်က မင်းကြီး ၏မွေးစားသား ဦးဓမ္မ၏ ဆန္ဒအရ သာက၀န်ကျောင်းရှေ့အနီး၌ပင် ဂူ သွင်း သဂြုင်္ိဟ်ခဲ့၏။ ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၂၇ စစ်ကိုင်းမင်းဆက်၏ ဒုတိယ မြောက်ဘုရင် တရဖျားကြီးနန်းတက် ပုဂံ ပျက်စီးယိုယွင်းလာချိန်၌ ပင် မြင်စိုင်း၊ ပင်းယ၊ စစ်ကိုင်း၊ အင်း ၀ စသည့်မြို့ပြနိုင်ငံငယ်များ အလျို လျို ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြသည်။ ပင်း ယမြို့တော်ကို ပုဂံဘုရင် စောနစ်မင်း ၏ အမတ်တစ်ဦးဖြစ်သူ ပင်လယ်မြို့ စား သီဟသူက ၁၃၁၃ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သကဲ့သို့ ယင်းအမတ် ၏ သားဖြစ်သော အသင်္ခယာစော ယွန်းက စစ်ကိုင်းကို ၁၃၁၆ ခုနှစ် တွင် တည်ထောင်မင်းပြုခဲ့သည်။ စစ် ကိုင်းမြို့၌ အသင်္ခယာစောယွန်းမှစ၍ မင်းခုနစ်ဆက်ထီးနန်းစိုးစံခဲ့ကြသည်။ ၁၃၂၇ ခုနှစ်တွင် အသင်္ခယာ စော ယွန်း နတ်ရွာစံလွန်သောအခါ နောင် တော်ဖြစ်သူ တရဖျားကြီးက ထီးနန်း ဆက်ခံပါသည်။ တရဖျားကြီးသည် ပင်းယမြို့ တည် တစ်စီးရှင်သီဟသူနှင့် မိဖုရား ရတနာပုံတို့က ဖွားမြင်သူဖြစ်၏။ တရဖျားကြီးကို မြန်မာရာဇ၀င်မှတ် တမ်းများ၌အသင်္ခယာ၏နောင်တော် အမြင့်မင်း၊ အရှေ့သာသနာကျောင်း ဒါယကာစသည်ဖြင့်ရည်ညွှန်းဖော်ပြ ကြ၏။ တရဖျားကြီးသည် ၁၃၃၅ ခုနှစ်အထိ စစ်ကိုင်းထီးနန်းကို ရှစ် နှစ်ကြာ စိုးစံအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂၆၉ ပုဂံ၊ မြင်းကပါရွာအနီးရှိ မင်္ဂ လာစေတီတော်ကို နရသီဟပတေ့မင်း စတင်တည်ထားကိုးကွယ် နရသီဟပတေ့မင်းသည် ၂၄ မေ ၁၂၅၆ တွင် နန်းတက်လာပြီး နောက် ၁၃ နှစ်အကြာ၌ စေတီတော် တည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်း မင်္ဂ လာစေတီကြီးမှာ ထုထည်ကြီးမားလှ ပြီး ပုဂံခေတ်နောက်ပိုင်း စေတီများ ၏ စံပြုပုံစံဟု ဆိုစမှတ်ပြုကြသည်။ သို့သော် စေတီတော် တည်နေစဉ် အတွင်း 'ဘုရားလည်းပြီး ပြည်ကြီး လည်းပျက်'ဟု တဘောင်ပေါ်လာ သဖြင့် စေတီတော်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ ၏။ ပံ့သကူမထေရ်ကနရသီဟပတေ့ မင်းအား ဆုံးမသြ၀ါဒပေးသောအခါ မှသာ စေတီတော်ကို ဆက်လက် တည်ဆောက်ခဲ့ရာ ၁၂၈၃ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့သည်။ မင်္ဂလာစေတီမှာ အုတ်ခုံမြင့် အထက်၌ တည်ထားပြီး ပစ္စယာသုံး ဆင့်နှင့် အခြေပတ်လည်တို့၌ ငါး ရာ့ငါးဆယ် ဇာတ်သရုပ်ဖော် စဥ့်ချပ် များရှိ၏။ အရံစေတီတော်များအား လည်း စဥ့်စိမ်း၊ စဥ့်ဝါသုတ် အုပ်ချပ် များဖြင့် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ သို့သော် စဥ့်သုတ်အုပ်ချပ်အများစု မှာ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်ဝန်းကျင်က ဂျာ မန်လူမျိုး ဘူမိဗေဒပညာရှင် ဒေါက် တာ ဖရစ်ဗွန်နွတ်ကလင်နှင့် ထော မန်းတို့၏ ခိုးယူမှုကိုခံခဲ့ရ၏။ မင်္ဂ လာစေတီ၌ ကျောက်စာတိုင်နှစ်တိုင် ရှိသည့်အနက် တစ်တိုင်မှာ ရှင်ဒိသာ ပါမောက္ခ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးမစ်ရှင် အဖွဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ ပုံ မှတ်တမ်းတင်ကျောက်စာဖြစ်၏။ ယခုအခါ ကျောက်စာများကို ပြတိုက် သို့ ရွှေ့ပြောင်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇၅၉ အလောင်းမင်းတရားကြီး မဏိ ပူရသို့ စစ်ချီသွားရာမှ နေပြည်တော် သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ မြန်မာဘုရင် ပိုင်နက်ဖြစ်သော မဏိပူရနယ်တွင် အင်းဝမင်းဆက် ၏ နောက်ဆုံးဘုရင် မဟာဓမ္မရာဇာ ဓိပတိလက်ထက် ၁၇၄၉ ခုနှစ်ကပင် အုပ်ချုပ်သူစော်ဘွားများ မသင့်မတင့် ဖြစ်ခဲ့ကြ၏။ ၁၇၅၃ ခုနှစ်တွင် စော် ဘွား ဂျရစ်န၀ါ (ွ့မေငဘ တြေဖေ) နှင့် သျမ်ရှား (ှ့ှော့ေ့) တို့ ထီး နန်းလုကြသဖြင့် ရတနာသိင်္ခနေပြည် တော်သို့ဆင့်ခေါ်ခံခဲ့ရ၏။ အလောင်း မင်းတရားကြီးက သျမ်ရှားအား ထီး နန်းပေးအပ်ရန် အဆုံးအဖြတ်ပေးခဲ့ ရာ အပြန်ခရီးတွင် ဂျရစ်န၀ါ၏သား အဂျစ်ရှား (ဗငြအှ့ေ့) က သျမ်ရှား အား လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်လိုက်၏။ တစ်ဖန်သူ့ကို ညီဖြစ်သူ ဘာရတ်ရှား (ြ့မေအှေ့ေ့) က နန်းချပြီး မဏိပူ ရထီးနန်းကို သိမ်းပိုက်ခဲ့၏။ နှစ်နှစ် ခန့်အကြာတွင်ဘာရတ်ရှားကွယ်လွန် သွားသဖြင့် မ-းမတ်များက ဂေါ်ရသျံ (ွသကမှ့ေ့) ကို နန်းတင်ကြ၏။ အလောင်းမင်းတရားသည်မဏိ ပူရနယ်အရှုပ်အထွေးများကို ဖြေရှင်း ရန် ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၁၇၅၈ တွင် ကိုယ် တိုင်စစ်ချီခဲ့၏။ ကျိန်းနောတောင် ထိပ်၊ ကျောက်ထရံလမ်းကျဉ်း၌ဂေါ် ရသျံဦးစီးသည့်တပ်များနှင့် တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ၁၂ ဇန်န၀ါရီ ၁၇၅၉ တွင် မဏိပူရကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့၏။ အလောင်းမင်းတ ရားသည်မဏိပူရမြို့လယ်၌အထိမ်း အမှတ်ကျောက်တိုင်ကို စိုက်ထူခဲ့ပြီး စန္ဒရော်မော်နီအား စော်ဘွားရာထူး ပေးအပ်ကာ နေပြည်တော်သို့ပြန်လာ ခဲ့၏။ ၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁၅၉ မကွေးမြို့ကို ပုဂံခေတ်အလောင်း စည်သူမင်းလက်ထက်တွင်စတင်တည် မကွေးမြို့ကို ပုဂံခေတ်ဦးကာ လအလောင်းစည်သူမင်းလက်ထက် စတင်တည်ခဲ့ကြောင်းအမှတ်အသား တွေ့ရှိရပါသည်။ အင်းဝခေတ် မင်း ရဲကျော်ထင် လက်ထက် ၃၁ မေ ၁၆၇၉ တွင် ထုတ်ပြန်သော အမိန့် တော်အရ မကွေးဒေသမှ အသည် သားများအား အစုလေးစုခွဲကာ ရွှေ တိုက်၌စာရင်းသွင်းကြရန် ညွှန်ကြား ထားပြီး ၉ ဧပြီ ၁၆၉၂ ရက်စွဲပါ အခြား အမိန့်တော်တစ်ခုတွင်လည်း ပဲခူးမြို့သူကြီးအုပ်ချုပ်ရာ နယ်နိမိတ် ကို ဖော်ပြထား၏။ ယင်းနယ်နိမိတ် အရ မကွေးနယ်မှာ အရှေ့ဘက် မတု လတောင်၊ အနောက်ဘက် ဧရာဝတီ မြစ်၊ တောင်ဘက် ယင်းချောင်း၊ မြောက်ဘက် ခေတ်ကျွန်း၊ ကရင် ကျွန်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ မကွေးမြို့၌ မြို့သူကြီးအဆက် ဆက် အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြရာ ကုန်းဘောင် ခေတ် ဘကြီးတော်လက်ထက်၌ ဦး ထွန်းပေါ်က အုပ်ချုပ်စီရင်ရကြောင်း သိရှိရ၏။ သာယာဝတီမင်း လက် ထက် မြို့သူကြီး မင်းထင်မင်းလှ ကျော်ခေါင်သည် ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ပြိုပျက်ခဲ့သည့် မြသလွန်ဘုရားအား အသစ်ပြန်လည် အုတ်မြစ်ချတည် ဆောက်ခဲ့၏။ မင်းတုန်းမင်းလက် ထက် မကွေးမြို့သူကြီး ဦးရွှေပြည့် မှာမူ မြင်ကွန်းအရေးတော်အတွင်း မြင်ကွန်းမင်းသားဘက်မှ ပါဝင်ခဲ့မှု ကြောင့် သူ၏နေရာ၌ မြို့သူကြီး အသစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ မကွေးမြို့ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် မကွေးမြို့ဝန်မှာ မကွေးမြို့အပါအ၀င် အနီးဝန်းကျင် မြို့ငယ်များအား စုပေါင်းအုပ်ချုပ်ရ သူဖြစ်၏။ အများအားဖြင့် မကွေး နှင့် မြင်ကွန်း နှစ်မြို့ကိုပူးပေါင်းအုပ် ချုပ်ရလေ့ရှိပါသည်။ ကင်းဝန်မင်း ကြီး၏ ဦးကောင်း၏ညီ ဦးချောင်း သည် မကွေးမြို့ဝန်ဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီး မင်း တုန်းမင်း၏ ရွှေဘယက်တံဆိပ်ပင် ပေးအပ်ချီးမြှင့် ခံခဲ့ရဖူးသည်ဆို၏။ ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၆၂ နယ်ချဲ့တော်လှန်ရေး ခေါင်း ဆောင် ၀န်းသိုစော်ဘွားကြီး ဦးအောင် မြတ်ကို ၀န်းသိုမြို့၌ဖွားမြင် ၀န်းသိုစော်ဘွားကြီး ဦးအောင် မြတ်ကို မဟာသိဒ္ဓိ သိုဟုံဘွားဘွဲ့ခံ ၀န်းသိုစော်ဘွား ဦးရွှေသားနှင့် သု ၀ဏ္ဏကာယဒေ၀ီဘွဲ့ခံ ဒေါ်ဒွေးဖြူတို့ က ဖွားမြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မွေးချင်း ညီအစ်ကို မောင်နှမ ခုနစ်ဦးရှိရာ မောင်အောင်မြတ်၊ မသူဇာ (သောင် သွတ်စော်ဘွားကတော်)၊ မောင်ရွှေ သိုက်၊ မယ်မူ၊ မယ်ဖန်၊ ခွန်ကျယ်၊ ခွန်ဆိုင်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ဦးအောင် မြတ်သည် ငယ်စဉ်ကပင် ဖခင်နှင့် အတူ ရတနာပုံနန်းတွင်းသို့ရောက်ရှိ ခဲ့ဖူး၏။အရွယ်ရောက်လာသောအခါ သီပေါမင်းထံတွင် စားတော်ကွမ်းရေ ကိုင်အဖြစ် အမှုထမ်းရင်း ကင်းဝန် မင်းကြီးထံမှ စာပေကျမ်းဂန်များ လေ့လာဆည်းပူးခဲ့သည်။ ဦးအောင်မြတ်သည် ၁၈၈၁ ခု နှစ်တွင်မဟာဝံသသီရိဇယသိုဟုံဘွား ဘွဲ့ခံ ၀န်းသိုစော်ဘွားဖြစ်လာခဲ့၏။ သီပေါမင်း ပါတော်မူသွားပြီးနောက် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ထံ အညံ့မခံဘဲ တော်လှန်ပုန်ကန်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျ အစိုးရကလည်း ၀န်းသိုစော်ဘွားကြီး အား စည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ရန် ကင်း ၀န်မင်းကြီးကို ၀န်းသိုသို့စေလွှတ်ခဲ့ သည်။ ၁၈၉၁ ခုနှစ်တွင် စော်ဘွား ကြီးနှင့်အဖွဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ခိုလှုံဝင် ရောက်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် အင်္ဂ လိပ်လက်ထက် ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် ညောင်ရွှေစော်ဘွားကြီးဆာစောမောင် ၏ အကူအညီဖြင့်တောင်ကြီးမြို့သို့ ပြန်လည်လာရောက်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၈၃ မင်းတုန်းမင်းလက်ထက် ထိပ် တန်းဝန်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သူ လောင်း ရှည်မြို့စားဝန်ကြီး ဦးမောင်ကလေး ကွယ်လွန် ဗန်းမော်ဆရာတော်၏ 'ပခန်း မှာလေ၊ လောင်းရှည်မှာဓား'စာချိုး တွင် မြင်ကွန်း-မြင်းခုန်တိုင်အရေး၌ ဓားဒဏ်ရာရရှိပြီး လည်ပင်းစောင်း နေသူလောင်းရှည်ဝန်ကြီးအကြောင်း ထည့်သွင်းစပ်ဆိုခဲ့ဖူးသည်။ လောင်း ရှည်ဝန်ကြီး ဦးမောင်ကလေးကို ၂၁ မတ် ၁၈၀၄ တွင် ဖွားမြင်ပါသည်။ ဖခင်မှာ ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက် သန်လျင်မြို့စားဝန်ကြီး ဦးကျော် ခေါင်ဖြစ်၏။ မွေးချင်း ၁၃ဦးရှိသည့် အနက်ထင်ရှားသူတို့မှာမြောက်နန်း မိဖုရား၊ ကျီအတွင်းဝန်ကတော်၊ ပြင် စည်မြို့စား မှန်နန်းအပျိုတော်၊ လက် ဖက်ရည်တော် မင်းလှမင်းထင်ရာဇာ နှင့်လောင်းရှည်ဝန်ကြီးတို့ဖြစ်ကြ၏။ လောင်းရှည်ဝန်ကြီးသည် ဘ ကြီးတော်လက်ထက်တွင် လက်ဖက် ရည်တော်၊ လှေတော်အုပ်ရာထူးများ ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပုဂံမင်းလက် ထက်တွင်မြို့တော်ဝန်၊ မင်းတုန်းမင်း လက်ထက်တွင် အတွင်းဝန်နှင့် ၀န် ကြီးရာထူးများ ရရှိခဲ့၏။ သီပေါမင်း နန်းတက်စတွင် ၀န်ကြီးအဖြစ်ဆက် လက်ခန့်ထားခံရသော်လည်း ၁၈၈၃ ခုနှစ်၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ကျမ်းကိုး ၁။ ကုန်းဘောင်ခေတ် မကွေးဒေသ (ဘမောင်)၊ ၃၁-၈-၁၉၉၇ တွင် မကွေး တက္ကသိုလ်၌ ဖတ်ကြားသောစာတမ်း။ ၂။ ကုန်းဘောင်ဆက်မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး (တတိယတွဲ)(ဦးမောင်မောင်တင်) ၃။ နန်းမူနန်းရာ စာပေါင်းချုပ် (မြကေတု) ၄။ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ စစ်သမိုင်း (နတ်မောက် ဘုန်းကျော်) ၅။ လောင်းရှည်မြို့စား မင်းကြီး (ဘုန်းနွယ်- ရေစကြို)၊ ငွေတာရီ၊ ၁၉၈၀၊ နိုဝင်ဘာ။ါ
ကနောင်မင်း-မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင်အရေးအခင်း-- ပန်းထိမ်းမင်းသား အရေးအခင်း
ကနောင်မင်းသားကြီး-From Myanmar Online Encyclopedia
ကနောင်မင်းကို ကနောင်မင်းသား(သို့) ကနောင်မင်းသားကြီးဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းကြသည်က များသည်။ စင်စစ်အားဖြင့် မြန်မာ့နန်းတွင်းအခေါ်အဝေါ်အရဆိုလျှင် အိမ်ရှေ့မင်းဖြစ်သော ကနောင်ကို ကနောင်မင်းဟုသာ ခေါ်ရမည်ဖြစ်သည်။ မင်းသား (သို့)မင်းသားကြီး ဆိုသည်မှာ အိမ်ရှေ့မင်းထက် အဆင့်နိမ့်သည်။
ကနောင်မင်းသား(မြန်မာ ၁၁၈၁-၁၂၈၁) သည်မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်းဘ၀နှင့်နေစဉ်ကပင် နိုင်ငံတော်ကို ခေတ်သစ်နိုင်ငံတခု ဖြစ်မြောက်အောင်ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကြိုးပမ်းခဲ့သည့် မြန်မာမင်းသားကြီး တစ်ပါး ဖြစ်သည်။ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု နည်းစံနစ် ပြောင်းလဲခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ လူ့သမိုင်းတွင် ခေတ်တစ်ခေတ်မှ အခြားခေတ်တစ်ခေတ်သို့ ပြောင်းလဲလာခဲ့ရသည်ဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ၁၉ ရာစု နှစ်များ အလယ်လောက်က ခေတ်ပြောင်းလဲခြင်းကို ဖန်တီးပေးသည့် အဖြစ် အပျက်များပေါ်ပေါက်ခဲ့လေသည်။
အောက်မြန်မာပြည်တွင်ဗြိတိသျှတို့ ရောက်ရှိ ကြီးစိုးလာခြင်း၊ ကိုယ့်မင်း ကိုယ်ချင်းနေသော မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းသည် ထိုစဉ်အခါက တိုးတက်လျက်ရှိသော ဥရောပနိုင်ငံအချို့နှင့် ဆက်သွယ်မှုများ ရရှိလာခြင်း ကြောင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှု နည်းစနစ်တို့၏ အခြေခံဖြစ်သောအသစ်အဆန်း ထွင်မှုပြောင်းလဲမှုတို့သည် အထက် မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိလာကာ ခေတ်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်မည့်အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့လေသည်။ ထိုအခွင့်အလမ်းများကို အမြင်ကျယ်စွာနှင့် အသုံးပြုကြသော ထိုခေတ်မြန်မာခေါင်းဆောင်တို့တွင် အရေး ပိုမိုပါဝင်ခဲ့သူကို ရှာဖွေလျှင်ကနောင်မင်းသားကြီးကိုပင် တွေ့ရပေမည်။
ကုန်းဘောင်ခေတ် အမပူရ ဒုတိယမြို့တည် သာယာဝတီမင်း (၁၈၃၇-၁၈၄၆)နှင့် `သီရိသုစန္ဒာမာလာမဟေ´ဘွဲ့အမည်ရှိ ရွှေဘိုမင်းတရားကြီး၏ တောင်ဆောင်တော်၊ ကျောက်မော်မြို့စား မိဖုရားတို့တွင် သားတော်နှစ်ပါးတို့ ထွန်းကားခဲ့ရာ သားအကြီးမှာ ပဉ္စမသင်္ဂါယနာတင် မင်းတုန်းမင်း ဖြစ်၍ အငယ်မှာ သတိုးမင်းရဲကျော်ထင် ဘွဲ့ခံ ကနောင်မင်းသား ဖြစ်လေသည်။ ကနောင်မင်းသားသည် သက္ကရာဇ် ၁၁၈၁ ခုတော်သလင်း လပြည့်ကျော်၂ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဖွားမြင်၏။ ဖွားစဉ်က မီးနေဆောင်သို့မရောက်မီ တောင်ဆောင်၌ဖွားမြင်သဖြင့် ခမည်းတော်က မောင်တောင်မင်းဟု ကိုယ်တိုင်မှည့်ခေါ်ခဲ့၏။ ချစ်စနိူးခေါ်သော ငယ်မည်မှာ `ထိပ်တင်ကောက်´ ဖြစ်၍ မင်းသားလတ်အဆင့်တွင် မင်းတပ်မြို့ကိုစားခဲ့ရသည်။ နောင်တော်ပုဂံမင်း (၁၈၄၆-၁၈၅၃)ထီးနန်းဆက်ခံတော်မူသောအခါ `သီရိသုမဟာ ဓမ္မရာဇာ´ဟူသော ဘွဲ့တော်နှင့် ကနောင်မြို့ကို စားရသည်။ ထို့ကြောင့် ကနောင်မင်းဟု တွင်လေသည်။
သို့သော် ဒုတိယ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲတွင် ပုဂံမင်းအား နောင်တော် မင်းတုန်းမင်းကရွှေဘိုမှပုန်ကန်ရာတွင် အတူဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သက္ကရာဇ် ၁၂၁၄-ခုနှစ်၊ သက်တော် (၃၃)နှစ်တွင် ရွှေဘိုမင်းတရားကြီး၏ အနောက်နန်းတော် မိဖုရား (အနောက်နန်းမတော်မမြလေး)၏ သမီးတော် လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်နှင့် လက်ထပ်တော်မူပြီးလျှင် တပယင်း၊ တောင်တွင်းကြီး၊ ပဉ္စလငါးမြို့နှင့် စလေမြို့များကို စားရလေသည်။
ကနောင်မင်းသားသည် အိမ်ရှေ့စံမင်းသား (နန်းညွန့်နန်းလျာမင်းသား) လည်းဖြစ်ပြီး ထီးနန်းစည်းစိမ်နှင့် အချုပ်အခြာအာဏာကိုဆက်ခံရန်အခွင့်ရှိသူဖြစ်နေပေရာ ထိုအခွင့်အရေးကို မက်မောကြသော တူတော်များ (မြင်ကွန်းမင်းသားနှင့် မြင်းခုန်တိုင် မင်းသား) တို့၏လုပ်ကြံမှုကြောင့် ကံတော်ကုန်ခဲ့ရသည်။ ကနောင်မင်းသား ကံတော်ကုန်စဉ် သက်တော်မှာ (၄၇)နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ ပဒေသရာဇ်ခေတ်ရှိ နန်းတွင်း အရေးအခင်းများမှာ သမိုင်းတင်ထားသည်ထက်လည်း ပိုမိုရှုပ်ထွေးနေတတ်သည်။
ကနောင်မင်းသားသည် မိဖုရားနှင့် ကိုယ်လုပ်တော်ပေါင်း ၅၂-ပါးရှိပြီး ၎င်းတို့မှဖွားမြင်သော သားသမီးတော်များမှာ ၁၀၂-ပါးရှိသည်။
အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသားနှင့် မင်းတုန်းမင်းတို့ ဆုံသောအခါ သားတော်၊တူတော်များအား စိတ်မချကြောင်း လျှောက်တင်တင်သောအခါ မင်းတုန်းမင်းက `အေး...မောင်ပုရေ...နောင်တော်ဘုရားကလည်း သီလ၀တို့ကို စိတ်မချဘူး။ မောင်ပုကလည်း မောင်ညိုတို့ကို ဂရုမစိုက်၊ သူတို့ကလည်း ထနောင်းပင်က မီးတကျည်ဆိုသလို လာကြလိမ့်ဦးမည်´ဟု မိန့်တော်မူသည်။
* မောင်ညိုဆိုသူမှာ ပန်းထိမ်းမင်းသားကို ဆိုလိုသည်။
* သီလ၀ဆိုသည်မှာ မြင်ကွန်းမင်းသားကို ဆိုလိုသည်။
* မောင်ပုဆိုသည်မှာ ကနောင်မင်းကို မင်းတုန်းမင်းက ငယ်စဉ်အခါက ညီပုလေးဟု ချစ်စနိုးခေါ်တွင်ရာမှ အရွယ်ရောက်လာသောအခါ မောင်ပု ဟုခေါ်ဆိုလေသည်။
ကနောင်မင်းသားသည် သာယာဝတီမင်း၏ သားတော် ၊ မင်းတုန်းမင်း၏ ညီတော် ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ပွဲ ပြီးဆုံးကာနီးတွင် မင်းတုန်းမင်းသားနှင့် ပူးပေါင်း၍ နောင်တော် ပုဂံမင်းကို ပုန်ကန် ခြားနားခဲ့ပြီး ၁၈၅၃ ၊ ဇူလိုင် (၁၁) တွင် မင်းတုန်းမင်း နန်းတက်ကာ ကနောင်မင်းသားက အိမ်ရှေ့မင်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မင်းတုန်းမင်းကြီးသည် ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းသူ ဖြစ်ပြီး ကနောင် မင်းသားမှာမူ စီမံခန့်ခွဲရေးတွင် နိုင်နင်းသူ ဖြစ်သည်။ ကနောင်မင်းသားသည် အနောက်နိုင်ငံများသို့ ပညာတော်သင်များ စေလွှတ်၍ ဗမာ့တပ်မတော်ကို ခေတ်မှီစေရန် ခေတ်မှီ လက်နက်များ တပ်ဆင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ စစ်လက်နက်များ ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံများလည်း တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကနောင်မင်းသားသည် ဧရာဝတီ မြစ်ရိုးအတိုင်း ဆန်တက်လာမည့် ဗြိတိသျှတို့၏ စစ်သင်္ဘောများကို တားဆီးနိုင်ရန် ရေမြှုပ်ဗုံးကို တီထွင်စမ်းသပ် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသည့် နိုင်ငံတော် ဖြစ်သည့် အားလျှော်စွာ ဘုန်းတော်ကြီးများက ရေသတ္တဝါများ သေကြေပျက်စီးကြောင်း ပြောကြား ကန့်ကွက်သဖြင့် ရေမြှုပ်ဗုံး ထုတ်လုပ်မှု စီမံကိန်းကို ရပ်တန့်ခဲ့ရသည်။ ထိုနည်းတူပင် အခြားသော စက်မှုထူထောင်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများမှာလည်း ၄င်းကွယ်လွန်ပြီးချိန်မှ တစ်စစနှင့် ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ရသည်။ အချို့စက်ရုံများကိုမူ အင်္ဂလိပ်တို့ မန္တလေးကို သိမ်းယူအပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်ပြီး လည်ပတ်ခဲ့ကြသေးသည်။ကနောင်မင်းသားကို တိုင်းသူပြည်သားများက ချစ်ကြည်လေးစားကြပြီး မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင် အရေးအခင်းတွင် မင်းသားကြီးသာ လုပ်ကြံ မခံခဲ့ရပါက မြန်မာပြည် သည်နယ်ချဲ့လက်အောက်သို့ ဤမျှလောက်လွယ်ကူစွာ၊ စောစီးစွာ မရောက်နိုင်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ထိုစဉ်က အင်္ဂလိပ်နှင့် ပြင်သစ်စသည့် နိုင်ငံတို့က ကိုလိုနီနယ်မြေများရရှိရန် အပြိုင်အဆိုင် လုံးပမ်းနေကြခြင်းဖြစ်ရာ အထွေထွေ ခေတ်နောက်ကျနေသော ပဒေသရာဇ်နိုင်ငံများအဖို့ အနှေးနှင့်အမြန်သာကွာခြားပြီး နယ်ချဲ့လက်တွင်းသက်ဆင်းကြရန် တာစူနေပေသည်။ ကနောင်မင်းသားမှာ အချုပ်အခြာအာဏာ ပိုင်စိုးသူမဟုတ်သဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ကာကွယ်မှုများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကန့်သတ်ချုပ်ခြယ်မှုများ မလွတ်ကင်းသေးချေ။
ကနောင်မင်းသား၏ အုတ်ဂူတော် ကျောက်စာ
မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင် အရေးအခင်းတွင် ကနောင်မင်းသား လုပ်ကြံခံရပြီး မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးမှာလည်း လက်မတင်လေး လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ ကနောင်မင်းသားနှင့်အတူ မလွန်မင်းသား၊ စကုမင်းသား၊ ပြင်စည်မင်းသား သုံးပါးလည်း အသက်ဆုံးပါးရသည်။ အိမ်ရှေ့မင်းနှင့် မင်းသားများ လုပ်ကြံခံရသည်မှာ သက္ကရာဇ်၁၂၂၈-ခုနှစ်၊ ဒုတိယ၀ါဆိုလပြည့်ကျော်(၇)ရက်နေ့၊ ခရစ်နှစ် ၁၈၆၆-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၂)ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့တွင် ဖြစ်သည်။ သင်္ဂြိုဟ်သည်မှာ သက္ကရာဇ်၁၂၂၉-ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း(၅)ရက်နေ့တွင် ဖြစ်ရာ (၁၁)လကြာမှ သင်္ဂြိုဟ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကြားတွင် မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင် အရေးအခင်းနှင့် ပန်းထိမ်းမင်းသား အရေးအခင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နေ၍ အလောင်းများကို ခေါင်းသွင်းပြီး နန်းမြေဘုံသာ စံနန်းတော် ဆောင်မဘုံတွင် ခင်းကျင်းထားပုံရသည်။
သက္ကရာဇ်၁၂၂၉-ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း(၅)ရက်နေ့တွင် နန်းမြေဘုံသာ စံနန်းတော် ဆောင်တော်မကို ဖျက်သိမ်း၍ အိမ်ရှေ့မင်းသင်္ဂြိုဟ်ရန် အုတ်ဂူ၊ ၎င်းအနီးတွင် မလွန်မင်းသား၊ စကုမင်းသား၊ ပြင်စည်မင်းသားတို့ကို သင်္ဂြိုဟ်ရန် အသီးသီး တန်းစီ၍ အုတ်ဂူတည်ပြီးလျှင်၊ ၎င်းဂူအရှေ့နှစ်တောင်အကွာတွင် စန္ဒာမုနိ ရုပ်ပွားတော်မြတ် ကိန်းဝပ်ပူဇော်ရန် အုတ်ပြသာဒ် ပြုလုပ်ထားသည်။ အနောက်ဘက်မှ စေတီကြီးကိုလည်း စန္ဒာမုနိ ရုပ်ပွားတော် ကိုစွဲ၍ စန္ဒာမုနိ ဘုရားဟုခေါ်လေသည်။ စေတီနှင့် ရုပ်ပွားထားရာ အုတ်ပြသာဒ်အကြားကား အိမ်ရှေ့မင်းနှင့် မင်းသားများ၏ အလောင်းများကို အုတ်ခုံပေါ်တွင် မြုတ်နှံထားသည်။ အိမ်ရှေ့မင်း၏ အုတ်ဂူကို အုတ်ပြသာဒ်ငယ် လုပ်ထားသည်။ ၎င်းအုတ်ပြသာဒ်ငယ်ကို စေတီနှင့် စန္ဒာမုနိ ရုပ်ပွားတော်မြတ် ဂန္ဓကုဋိတိုက်နှင့် အုတ်ရိုးသွယ်ဆက်ထားသေးသည်။
ကနောင်မင်းသား ရုပ်ကလာပ်အား မန္တလေးတောင် ခြေရင်းရှိ ဂူသွင်းသဂြိုလ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် ကနောင်မင်းသား၏ အုတ်ဂူကို စန္ဒာမုနိစေတီ ဘုရားဝင်းအတွင်း ရွေ့ပြီး အခု မန္တလေးတောင်အသွား လမ်းဆုံမှာ အုတ်ဂူတည်ထားသည်။
1. ↑ ဒဂုန်ခင်ခင်လေး၏ မြင်ကွန်းညီအစ်ကိုနှင့် ပတိမ်းမင်းသားပုံကန်မှု (အဋ္ဌာရသ မဂ္ဂဇင်း၊ အမှတ်တစ်)
2. ↑ နေထွတ်၏ ‘မန္တလေးအဘိဓာန်’ စာအုပ်
3. ↑ ရွှေကိုင်းသား၏ နှစ်(၁၀၀)ပြည့် မန္တလေး
4. ↑ မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်)၏ ကုန်းဘောင်ရှင်းတမ်း
မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင် အရေးအခင်း-From Myanmar Online Encyclopedia
မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင် အရေးအခင်းသည် ရတနာပုံခေတ်နှောင်းပိုင်းတွင် ထင်ရှားသော နန်းတွင်းလုပ်ကြံမှုကြီး ဖြစ်သည်။ ၁၈၆၆-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၂)ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့တွင် မင်းတုန်းဘုရင်နှင့် တောင်ရွှေရေးဆောင် မိဖုရားတို့က မွေးသော သားတော်ကြီးများဖြစ်သည့် မြင်ကွန်းမင်းသား(သီလ၀)နှင့် မြင်းခုန်တိုင်မင်းသား (ဖိုးထင်) နှစ်ပါးက ဦးဆောင်ပြီး လွှတ်တော်တွင် စည်းဝေးနေသော အိမ်ရှေ့ စံ ကနောင်မင်းသားကြီးကို ဥပါယ်နှင့် လုပ်ကြံခဲ့သည်။ ကနောင်မင်းသားကြီးမှာ ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်သွားသည်။ မင်းသားများသည် ခမည်းတော်ဖြစ်သော မင်းတုန်းဘုရင်ကိုပါ လုပ်ကြံဖို့ရာမှာ မအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် ဘုရင်ပိုင် ရေနန်းစင်္ကြာ သင်္ဘောနှင့် အောက်ပိုင်း မလွန်အရပ်ကို စုန်ပြီး ပုန်ကန်ခဲ့ပါသည်။ မကြာခင် အရေးနိမ့်သွားသည့်အတွက် အင်္ဂလိပ်သိမ်းထားသော မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကို ၀င်ရောက်ခိုလှုံသွားပါသည်။
* ကုန်းဘောင်မင်းဆက်တည်ထောင်သည့် အလောင်းမင်းတရား က `ငါ့သားကြီးများ အစဉ်အတိုင်း မင်းပြုရစ်´ဟု မှာကြားခဲ့သည့်အတိုင်း သားတော်ကြီး နောင်တော်ကြီးမင်း ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သည့်အခါ ညီတော် မြေဒူးမင်း(ဆင်ဖြူရှင်)က ထီးနန်းအမွေဆက်ခံသည်။ မြေဒူးမင်းက ဖခင်မှာကြားသည့်အတိုင်း မလုပ်ဘဲ သားတော် စဥ့်ကူးမင်းကို အိမ်ရှေ့အရာပေးသည်။ စဥ့်ကူးမင်းနေပြည်တော်မရှိခိုက် ဖောင်းကားစား မောင်မောင်က ထီးနန်းလုသည်။ ဖောင်းကားစား မောင်မောင်ကို ဘိုးတော်ဘုရား(ဗဒုံမင်း)ကမှူးမတ်အကူအညီဖြင့် တိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ပြီး ထီးနန်းသိမ်းပိုက်သည်။ ဘိုးတော်ဘုရားသည် ထီးနန်းကိုလုပ်ကြံစဉ် ညီတော် ပင်းတလဲမင်းကို အိမ်ရှေ့စံထားမည်ဟု ကတိထားခဲ့သော်လည်း နန်းတက်သောအခါ သားတော်ကိုသာ အိမ်ရှေ့စံထားသည်။ သို့သော် သားတော်အိမ်ရှေ့စံ ကွယ်လွန်သဖြင့် မြေးတော် ဘကြီးတော်(စစ်ကိုင်းမင်း)ကို ဆက်လက်အိမ်ရှေ့စံထားသည်။ စစ်ကိုင်းမင်းကို ညီတော် သာယာဝတီမင်းက ပုန်ကန်ပြီး နန်းတက်သည်။ သာယာဝတီမင်း၏ ထီးနန်းအမွေကို သားတော် ပုဂံမင်းက ဆက်ခံသည်။ ပုဂံမင်းကို မင်းတုန်းမင်းနှင့် ကနောင်မင်းသားက တော်လှန်ကာ မင်းတုန်းမင်း နန်းတက်သည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် ဆင်ဖြူရှင်မင်းက စပြီးပျက်ခဲ့သော အစဉ်အလာကို ပြန်လည်ပြုပြင်သည်။ သားတော်များကို ထားပြီး ညီနောင်ကနောင်မင်းကို အိမ်ရှေ့စံ အဆောင်အယောင်များ အပ်နှင်းသည်။ ထိုကြောင့် သားတော်များဖြစ်သော မြင်ကွန်းမင်းသားညီနောင်များက မကြေနပ်သော အကြောင်းတစ်ချက် ဖြစ်ပေသည်။
* အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသား၏ နိုင်ငံတော်ကို ခေတ်မီလက်နက်နိုင်ငံ တည်ဆောက်နေမှုကို နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့က မလိုလားကာ မြင်ကွန်းမင်းသားညီနောင်များအား သွေးထိုးပေးခြင်းသည် အကြောင်းတစ်ရပ် ဖြစ်ပေသည်။
* မင်းတုန်းမင်း၏ အလိုအတိုင်း တူတော်မင်းသားများကို ကနောင်မင်းသားက ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းရ၏။ မင်းသားအများက ကနောင်မင်းသား၏ အဆုံးအမအောက်တွင် ကျေနပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မကျေနပ်သည်ဖြစ်စေ ငြိမ်နေကြရသည်။ သို့သော် မင်းတုန်းမင်း၏ သားတော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်သော မြင်ကွန်းမင်းသားကမူ ငြိမ်နေကြသူများထဲတွင် မပါ။ အခွင့်အရေးရသည်နှင့် ကနောင်မင်းသားကိုသာမဟုတ် ဖမည်းတော် မင်းတုန်းမင်းတရားကိုပင် ထပြီးဆန့်ကျင်သည်။ မြင်ကွန်းမင်းသားသည် မင်းတုန်းမင်းနှင့် တောင်ရွှေရေးဆောင် မိဖုရားမှ ဖွားမြင်သော သားတော်ကြီး ဖြစ်သည်။ ကနောင်မင်းသား၏ သမီးတော် တောင်ညိုမင်းသမီးနှင့် လက်ထပ်ခဲ့သဖြင့် သမက်တော်စပ်သော်လည်း ကနောင်မင်းသားအား မသိမသာတစ်မျိုး၊ သိသိသာသာတစ်မျိုး ဆန့်ကျင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
* ကနောင်မင်းသားက မြို့စား၊ ရွာစားမင်းသားများအား မိမိတို့အပိုင်စားရသည့် နယ်မြေသို့ သွားရောက်နေထိုင်ခွင့် မပြုခြင်းအပေါ်တွင်၎င်း၊ မိမိတို့၏ ထီးနန်းဆက်ခံခွင့်ကို အပိုင်သိမ်းကာ အိမ်ရှေ့စံ ဖြစ်နေသည်ကို၎င်း မကျေနပ်ရင်းစွဲ ရှိနေခဲ့သည်။
မင်းတုန်းမင်းတရားသည် သာသနာပြုမင်းပီပီ သားငှက်များကို ဘေးမဲ့ပေးသည်။ နေပြည်တော်တွင် ကျွဲသား၊ နွားသားမစာရ၊ မသတ်ရဟု အမိန့်ထုတ်သည်။ မြင်ကွန်းမင်းသားညီနောင်က ခမည်းတော်ပိုင် မင်္ဂလာနွားဖြူကို သတ်စားသည်။ ထိုသို့ မင်းမိန့်ကို ဖီဆန်သော သားတော်နှစ်ဦးအား ဆုံးမရန် မင်းတုန်းမင်းက အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသားကို တာဝန်ပေးသည်။ ကနောင်မင်းသားက မင်းသားညီနောင်ကို ကြေးတိုက်သွင်းကာ ချုပ်နှောင်ထားလိုက်သည်။ မင်းမိန့်ကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းသည် သေဒါဏ်ထိုက်သည့် အပြစ်ဖြစ်သည်။ ကနောင်မင်းသားသည် တူတော်တို့အား သေဒါဏ်မပေးဘဲ ချုပ်ရုံချုပ်ထားသည်ကို မင်းသားညီနောင်က မကျေနပ်ကြပေ။
ခမည်းတော် မင်းတုန်းမင်းအပေါ်တွင်လည်း သားတော်များကို ထီးနန်းဆက်ခံခွင့် ပေးရန်မစဉ်းစားဘဲ ညီတော်ကို အိမ်ရှေ့စံအရာ ပေးထားခြင်းအတွက် ကျေနပ်ဟန်မတူပေ။ ထို့ကြောင့်ပင် မြင်ကွန်းမင်းသားသည် တစ်နေ့တွင် နန်းတော်ကို ပုန်ကန်ပြမည်ဟု ကြိမ်းဝါးလေ့ရှိသည်။
မြင်ကွန်းမင်းသားသည် မင်းတုန်းမင်း အမရပူရမြို့၊ အိမ်နိမ့်စံအဖြစ် စံတော်မူစဉ် ရွှေရေးဆောင်မိဖုရားမှ ဖွားမြင်တော်မူသော သားတော်ဖြစ်သည်။ ငယ်နာမည်မှာ မောင်မျိုးအေးဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးရသောဘွဲ့တော်မှာ သီလ၀ ဖြစ်သည်။ မြင်ကွန်းမင်းသားသည် ပုဂံမင်းလက်ထက်ကပင် သတိုးမင်းလှကျော်စွာဘွဲ့နှင့် မတဲးမြို့ကို စားရ၏။ ခမည်းတော် မင်းတုန်းမင်း နန်းတက်သောအခါ သုမဟာသီရိဓမ္မရာဇာဘွဲ့နှင့် မြင်ကွန်းမြို့ကို စားရသောကြောင့် မြင်ကွန်းမင်းသားဟု ခေါ်ဆိုကြလေသည်။
မင်းတုန်းမင်း၏ သားတော်များတွင် အသက်အားဖြင့် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ သတ္တိဗျတ္တိ အကောင်းဆုံးနှင့် စိတ်ဓာတ်အားဖြင့် အထက်ဆုံးဖြစ်ပြီး ညီတော်၊ နှမတော်များကိုလည်း ချစ်ခင်သောကြောင့် ညီတော်၊ နှမတော်အားလုံးက အထူးပင် ချစ်ကြောက်ရိုသေရလေသည်။
* မင်းတုန်းမင်းတရားသည် သားတော်ကြီးများ စုံညီစွာခစားမိလျှင် ပြုံးတော်မူလျှက် `ကိုင်း ငါ့သားများ ခမည်းတော်ဘုရားကို ပွဲတော်ဟင်းများ ကိုယ်ချက်တတ်ရာ သား၊ ငါးများကို ကိုယ်တိုင်ချက်၍ ဆက်ကြစမ်းပါ။ မြိန်ရှက်စွာ ပွဲတော်တည်လိုတယ်´ ဟု စင်စစ်အားဖြင့် ဆန္ဒမရှိသော်လည်း ကျွမ်းဝင်ချစ်ခင်သည်ဟူသော ပရိယာယ်ဖြင့် မိန့်တော်မူလျှင် အချို့သော သားတော်များမှာ ၀မ်းမြောက်စွာဖြင့် မည်သည့်ဟင်းချက်တတ်ကြောင်း၊ ကိုယ်တိုင်ချက်၍ ဆက်သကြသည်။ မြင်ကွန်းမင်းသားအလည့်တွင် `မှန်လှပါ။ ဘုရားသားတော် အမဲသားဟင်း ချက်တတ်ကြောင်းပါဘုရား´ဟု လျှောက်ထားလိုက်သည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် အမဲသားဟင်းကို ကိုယ်တိုင်လည်း ပွဲတော်မတည်၊ တိုင်းသူပြည်သား၊ ရဟန်းရှင်လူအားလုံး မစားသောက်ရန် တင်းကျပ်စွာ တားမြစ်ထားရာ ရုတ်တရက် မြင်ကွန်းမင်းသား လျောက်တင်ချက်ကို ကြားသောအခါ `ဟင်´ဟု သာ တစ်လုံးတည်း နှုတ်မှထွက်ကာ မျက်နှာတော်ညို၍ အတွင်းတော်သို့ ၀င်တော်မူသည်။ ထိုအကြောင်းကို ကြားသိရသော ငယ်ကျွန်များက `အရှင်က ဒါတော့ လွန်လွန်းထင်ပါ့ဘုရား´ ပြောရာ မြင်ကွန်းမင်းသားက `မဟုတ်တရုတ် နေရာရှာလို့၊ ငါတို့ကို ဟင်းချက်ခိုင်းနေရသေးတယ်၊ လခပေးထားတဲ့ စားတော်ကဲတွေ အရှိသားနဲ့၊ ဒါနဲ့ ငါကလည်း သူတားမြစ်ထားတဲ့ နွား အမဲသားချက်တတ်ကြောင်း အရွဲ့တိုက်ပြီး သံတော်ဦးတင်လိုက်တာပဲဟေ့´ဟု မိန့်တော်မူသည်။ မြင်ကွန်းမင်းသားသည် တမင်အရွဲ့တိုက်လျှောက်တင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
* မင်းတုန်းမင်းသည် သားတော်များကို ဟင်းချက်ခိုင်းသည်သာမဟုတ်၊ မိဖုရားများကိုလည်း ရံဖန်ရံခါ အားလုံးကိုခေါ်ပြီးလျှင် ဟင်းချက်ခိုင်းတော်မူခြင်း၊ မုန့်လုပ်ခိုင်းတော်မူခြင်းရှိသည်။ တနေ့၌ မိဖုရားများအား လုပ်တတ်သော မုန့်များကို ကိုယ်တိုင်လုပ်၍ ဆက်သစေ၏။ ဆက်သလာသော မုန့်အမျိုးမျိုးထဲတွင် လက်နှင့်စမ်းလိုက်လျှင် ပျော့ပျော့ပျောင်းပျောင်း နူးနူးညံ့ညံ့ ရှိသော်လည်း စားမည်ဟုဖဲ့လိုက်သောအခါ မည်သို့မျှ ဖဲ့မရ၊ ဖြတ်မရသော မုန့်ကို တွေ့၍ ဒီမုန့် ဘယ်မိဖုရားလုပ်တာလည်းဟု စစ်မေး၏။ သို့သော် ယင်းမုန့်ကို လုပ်သူ လက်သည် မပေါ်ပဲ မည်သူမျှ စား၍မရဘဲ လွှင့်ပစ်လိုက်ရ၏။ လွှင့်ပစ်သောအခါ ခွေးများပင်ကိုက်စား၍မရပဲ ကျီးများ၊ စွန်များ ချီသွားခြင်းဖြင့်သာ အဆုံးသတ်ခဲ့ရသည်။ ထိုမုန့်ကား ဘုရင်တွင် စားစရာ ပေါများပါလျက် အကြောင်းရှာပြီး မိဖုရားများကို မုန့်လုပ်ခိုင်းရမည်လောဟု ဒေါပွနေသည့် မြင်ကွန်းမင်းသားက သူ၏ မယ်တော်ဆောင်မှ အပို့လွှတ်သောသူကို နှုတ်ပိတ်ပြီး ဖလှယ်ပေးလိုက်သော မုန့်ပင်ဖြစ်သည်။ တမင်တကာရှာကြံပြီး ဆင်သေ၏ သိုကြီးကို ဓားဖြင့်လှီးဖြတ်ကာ မုန့်နှင့်တူအောင်ကြော်၍ ပေးလိုက်သော ဆင်၏သိုသားပင် ဖြစ်၏။
* တစ်နေ့၌ မြင်ကွန်းမင်းသားညီနောင်တို့သည် ငယ်ကျွန်များနှင့်တကွ ဥယျာဉ်တော်ထဲတွင် ကစားနေကြသည်။ အကစားလွန်ပြီး မိုးချုပ်သွားသောအခါ အိမ်တော်၌လည်း အစောင့်မကျန်ရစ်ခဲ့သဖြင့် ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ထားမည့်သူ မရှိဘဲ ဖြစ်နေလေသည်။ ထိုအခါ မြင်ကွန်းမင်းသားညီနောင် နှစ်ပါးသည် ကျုံးတော်အနီး၌ မြက်စားနေကြသော ဘုရင်၏ မင်္ဂလာနွားဖြူ တစ်ရှဉ်းလုံးကို ဖမ်း၍သတ်ကာ ချက်ပြတ်၊ ကြော်လှော်ပြီး စားသောက်လိုက်ကြသည်။
* မြင်ကွန်းမင်းသားညီနောင်ပုန်ကန်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကို အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသား၏ သမီးတော်၊ မြင်ကွန်းမင်းသား၏ မိဖုရားက သိရှိလေသောကြောင့် လျှို့ဝှက်စွာ ခမည်းတော်အား သံတော်ဦးတင်၏။ ထိုအကြောင်းကို မြင်ကွန်းမင်းသား သိသောအခါ `သယ်..သင့်အဖေ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော့ သင့်ကို မိဖုရားမြှောက်မတဲ့လား၊ ငါရှင်ဘုရင်ဖြစ်မှ သင်းမိဖုရားဖြစ်မှာတော့ သူမကြည့်ဘူး၊ ဒါလောက် အဖေကို လင်ထက်ပိုချစ်လှတဲ့ သတ္တ၀ါမ၊ သွားမြဲလမ်းကိုသာ သွားတော့´ဟု ပြောဆိုကြိမ်းဝါးပြီး အင်္ဂတေထောင်းသော မောင်းဆုံထဲသို့ အရှင်လတ်လတ်တုတ်နှောင်ကာ ထည့်ထောင်း၍ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ်လိုက်လေသည်။ (သမီးတော်ကို မြင်ကွန်းမင်းသား သတ်ပစ်ကြောင်း ကနောင်မင်းသား သိသော်လည်း အရေးမယူပဲ `သားသမီးပဲ နောင်များစွာရနိုင်သေးသည်´ဟု ဆိုကာ အေးအေးနေခဲ့လေသည်။
( မြင်ကွန်းမင်းသား အကြောင်းစာအုပ်တစ်အုပ်မှာ သူက ကနောင်မင်းရဲ့သမီးတော်ကို မသတ်ပါဘူးလို့ကြားဖူးပါတယ် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်)
* ညီတော် မြင်းခုန်တိုင်မင်းသားကလည်း သက်တော် ၁၆နှစ်၊ ၁၇နှစ်တိုင်အောင် တောင်ဥယျာဉ်တော်အတွင်းရှိ ရေကန်တွင် ငှက်ပျောတုံးကို ဖောင်ဖွဲ့၍ တက်စီးပြီး ရှေ့ကကြိုးတတ်လျက် လူနှစ်ယောက်က ဆွဲရလေသည်။ နေ့စဉ် ပြုလုပ်ရသောကြောင့် မှူးမတ်ကြီးများမှစ၍ အရာရှိများက ကွယ်ရာတွင် မြင်းခုန်တိုင်ဟု မခေါ်ဘဲ လူတေလေးဟု ခေါ်လေသည်။
မြင်ကွန်းမင်းသားသည် မိမိ၏ အထွေထွေ မကျေနပ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ညီတော်မြင်းခုန်တိုင်မင်းသားနှင့် တိုင်ပင်သည်။ ခမည်းတော်နှင့် ဘထွေးတော်တို့ကို ပုန်ကန်ပြီး ထီးနန်းသိမ်းပိုက်ရန် ကြံစည်သည်။ ထိုအကြံအစည်ကို ရတနာပုံနေပြည်တော်ရှိ အင်္ဂလိပ်ကိုယ်စားလှယ်များက အားပေးအားမြှောက်ပြုသည်။ နိုင်ငံတော် ခေတ်မီရေးအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်နေသော ကနောင်မင်းသားမရှိလျှင် ခေတ်မီရေးလုပ်ငန်းများ ရပ်စဲကုန်လိမ့်မည်ဟု အင်္ဂလိပ်တို့က တွေးထင်ယုံကြည်ကြပုံပေါ်သည်။
စရိုက်ကြမ်းပြီး မိမိလုပ်ကိုင်ချင်ပြီဆိုလျှင် မည်သည့်အရေးကိုမျှ မငဲ့ကွက်၊ မည်သူ့မျက်နှာကိုမှ မထောက်သော မြင်ကွန်းမင်းသားသည် ထီးနန်းစည်းစိမ် လုယူရေးအတွက် လူယုံများကို စုသည်။ စာပေပညာရှင်၊ ဗေဒင်ပညာရှင် ဖြစ်သော စလေဦးပုညက အခါတော်ပေးသည်။ မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင်မင်းသားတို့သည် ဦးပုည တွက်ချက်ပေးသော အခါတော်အတိုင်း လှုတ်ရှားရန် ပြင်ဆင်ကြသည်။ (ပထမဆုံးလုပ်ကြံရန် ဦးပုညထံ အခါတောင်း၍ ကြိုးစားကြရာ၌ မင်းတုန်းမင်းတရား လယ်ထွန်မင်္ဂလာဆင်းချိန်တွင် လုပ်ကြံရန် ဖြစ်သည်။ သို့သော် စစ်အင်္ဂါလေးပါးနှင့် ဘုရင်ကို ၀ိုင်းရံထားကာ ကြွမြန်းသောကြောင့် လုပ်ကြံရန် မအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပေသည်။
သက္ကရာဇ်၁၂၂၈-ခုနှစ်၊ ဒုတိယ၀ါဆိုလပြည့်ကျော်(၇)ရက်၊ ခရစ်နှစ် ၁၈၆၆-ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၂)ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့တွင် ရတနာပုံနေပြည်တော် တစ်ခုလုံး အုံးအုံးကျွတ်ကျွတ် ဆူညံသွားစေသည့် အရေးအခင်းကြီးပေါ်လာသည်။ ထိုနေ့တွင် အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသားသည် ယာယီလွှတ်တော်အနီးရှိ တဲကြီးအတွင်း၌ မြတောင်ဝန်ကြီးဦးမှို၊ ပခန်းဝန်ကြီး ဦးရန်ဝေး တို့နှင့်အတူ သဿမေဓကိစ္စများကို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေသည်။
မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးမှာ တောင်နန်းမတော် မိဖုရားနှင့်အတူ မဟာလောကမာရဇိန် ဘုရားပရိဝှဏ်တော်အတွင်း၌ ပါဠိပိဋကတ်တော်များ ကျောက်ထက်အက္ခရာတင်ရာတွင် ကြီးကြပ်ရန် စီစဉ်နေသည်။ မင်းတရားနှင့်အတူ သားတော်မက္ခရာမင်းသား၊ အနောက်ဝန်ရပ်စောက်မြို့စား၊ လှိုင်းတက်မြို့စား၊ ဘုန်းတော်ဖြစ်သေနတ်ဗိုလ်၊ ကိုယ်ရံတော်၊ စားတော်ကွမ်း၊ ရေထီးဓားလက်စွဲ စသည့် နောက်လိုက်ငါးဆယ်ခန့်တို့ လိုက်ပါရန် ပွဲတော်ဆောင်မှ စံနန်းတော်အနောက်တံခါးဆီသို့ ထွက်လာကြသည်။
နန်းတော်ဝင်းနှင့် ကပ်လျက်ရှိ မြင်ကွန်းမင်းသားဝင်းတွင် ငဖြူသီး၊ ဇော်ဂျီဗိုလ် အစရှိသော မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင်မင်းသားတို့၏ နောက်လိုက် (၅၀)ခန့်မှာ အရက်သေစာ သောက်စားရင်း ရဲဆေးတင်နေကြသည်။
ဦးပုည သတ်မှတ်ပေးသော မွန်းတက်ချိန် အခါတော်သို့ရောက်သည်နှင့် တောင်ပြင်ဟော်ကုန်းဘက်တွင် စောင့်နေသူတို့က မီးရှို့အချက်ပေးသည်။ မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင်မင်းသားတို့သည် ရန်ဖြစ်လေဟန် အကွက်ဆင်ပြီး စံနန်းတော်အတွင်းသို့ ပြေးဝင်သည်။ မြင်ကွန်းမင်းသားသည် ဓားကိုင်ကာ ခုတ်မည့်ဟန်ဖြင့် မြင်းခုန်တိုင်မင်းသားနောက်မှ လိုက်သည်။ မြင်းခုန်တိုင်မင်းသားက အသက်ဘေးမှ လွတ်အောင်ပြေးသည့်ဟန်ဖြင့် ပြေးလာရင်း လွှတ်တော်အနီးသို့ ရောက်သည့်အခါ `ဘထွေးတော် ကယ်တော်မူပါ´ ဟု အသံကုန်အော်သည်။
ကနောင်မင်းသားသည် မင်းသားညီနောင်တို့ ရန်ဖြစ်နေကြပြီဟု မှတ်ထင်ပြီး တားရန်ကြိုးစားသည်။ သို့သော် စံနန်းတော်ဝင်းအတွင်း ဓားကိုင်၍၀င်လာသော မြင်ကွန်းမင်းသား၏ မူမမှန်ပုံကို သတိပြုမိသွားသည်။ မိမိကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် လွှတ်တော်တက်ရာ၌ ဓားလှံ၊ သေနတ်များကို စံနန်းတော်အပြင် အုတ်ဇရပ်၌ နောက်လိုက်နောက်ပါ များနှင့်အတူ ထားခဲ့ရပါလျက် မြင်ကွန်းမင်းသားက ဓားကိုင်ပြီး စံနန်းတော်ဝင်းအတွင်း ၀င်လာပုံမှာ မရိုးသားဟု အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသား စဉ်းစားမိသွားသည်။ မင်းသားညီနောင်တို့နောက်မှ နောက်လိုက်များ ပါလာသည်ကလည်း မသင်္ကာစရာ ဖြစ်၏။
ထိုအချိန်တွင် မြင်ကွန်းမင်းသား၏ မူမမှန်ပုံကို ရိပ်စားမိသဖြင့် စုံစမ်းရန် ရှေ့သို့တိုးထွက်သွားသော မြတောင်ဝန်ကြီးဦးမှိုမှာ ပုန်ကန်သူတို့၏ ဓားချက်မိသွားလေသည်။ ဦးမှို၏ အဖြစ်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရသော ဖိနပ်တော်သား ဦးကရင်က `ရန်သူတော်ပါဘုရား၊ သတိထားပါဘုရား´ဟု အော်ဟစ်သတိပေးသည်။ ကနောင်မင်းသားသည် တူတော်မောင်မင်းသားများ ရန်ရှာမည့် အစီအစဉ်ကို သိသွားသည်။ ထို့ကြောင့် လွှတ်တော်ပေါ်သို့ ပြေးတက်၏။ အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသားသည် ရန်ကိုရှောင်ရန် ကြိုးစားရင်း လှေခါးအတက်တွင် မြင်ကွန်းဘက်တော်သား ငဖြူသီး မီလာပြီး ဓားနှင့်ခုတ်သဖြင့် ခြေထောက်ကို ဓားချက်ထိပြီး လဲကျသည်။ ထိုအချိန်မှာပင် မြင်းခုန်တိုင်မင်းသား ရောက်လာကာ အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသား၏ ခေါင်းကို ဖြတ်ယူလိုက်သည်။ နိုင်ငံတော်ကို ခေတ်မီလက်နက်နိုင်ငံ တည်ဆောက်ချင်သော အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသားသည် မလောက်လေး မလောက်စား မင်းသားငယ်များ၏ လက်ချက်ဖြင့် ကျဆုံးရသည်။ ပုန်ကန်သူတို့သည် ကနောင်မင်းသား၏ ဘက်တော်သားများဖြစ်သော မလွန်မင်းသား၊ ပြင်စည်မင်းသား၊ စကုမင်းသားတို့ကို အိမ်ရှေ့မင်းက ခေါ်သည့်ဟန် လိမ်ညာခေါ်ယူကာ စံနန်းတော် လက်ယာဝင်း တံခါးအပြင်၌ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်လိုက်ကြသည်။
ဒီအရေးမှာ အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသား၊ မြတောင်မြို့စားသေနတ်ဝန်ကြီး၊ မလွန်မင်းသား၊ စကုမင်းသားနဲ့ ပြင်စည်မင်းသားတို့ ကျဆုံးခဲ့ကြသည်။ လောင်းရှည်မြို့စား ၀န်ကြီး၊ လက်ဝဲ၀င်းမှူး၊ မြေဒူးမြို့စား စသူတို့ ဒဏ်ရာရကြသည်။ ပခန်းဝန်ကြီး ဦးရန်ဝေး အပါအ၀င် မှူးမတ်အချို့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ကြသည်။
မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင်ညီနောင်တို့၏ နောက်လိုက်သားများသည် တံခါးနီ နန်းမြေဘုံစံနန်းတော်ကို အတင်းဝင်ကြသည်။ အရှေ့ဝင်းမှူး၊ တောင်ထားဝယ်ဗိုလ်၊ ကင်းဝန်မင်းကြီးတို့သည် စံနန်းတော်သို့ကျူးကျော်လာသော မြင်ကွန်းမင်းသားတို့အား ခုခံတိုက်ခိုက်သည်။ သို့သော်အားခြင်းမမျှ ခုခံသူတို့ အထိအခိုက် အကျအနာများသည်။ အတွင်းဝန် ရေနံချောင်းမြို့စား မင်းကြီး မဟာမင်းလှကျော်ခေါင်ကို ဓားများဖြင့်မိုးကာ ခြိမ်းခြောက်၍ သစ္စာခံစေသည်။ သူရဲဝန် `ရွှေပြည့်ရန်အောင်မြင်းဝန် သတိုးမင်းကြီး မဟာသမိန်ဘေဖြတ်စ´ကိုလည်း ၎င်းနည်းအတိုင်း သစ္စာခံစေရာ သစ္စာမခံငြင်းဆန်သဖြင့် ငဖြူသီးကပင် လုပ်ကြံလိုက်ရာ စံနန်းတော်ပေါ်တွင် ကျဆုံးရ၏။ သူရဲဝန်၏ ကျောက်စီဓားကို ငဖြူသီးက ရလေသည်။ ဗောင်းတော်ဆောင်မာရဘင် တံခါးကိုဖျက်၍ အတင်းဝင်ရောက်လုပ်ကြံကြသဖြင့် တံခါးမှ စောင့်ရှောက်ခုခံသူ တောင်ဒ၀ယ်ဗိုလ်သည် ရန်သူ့လက်ချက်ဖြင့် ကျဆုံးရလေသည်။
မြင်းခုန်တိုင်မင်းသားသည် မင်းတုန်းမင်းရှိရာ ယာယီနန်းတော်သို့ အပြေးလာသောအခါ မင်းတုန်းမင်းအနီး ခစားနေသော ကင်းဝန်မဟာမင်းလှဇေယျသူမှ `ခမည်းတော်ကို မလုပ်ကြံသင့်ပါ ဘုရား´ဟုဆိုကာ ရှေ့မှစီး၍ကာကွယ်သဖြင့် မြင်းခုန်တိုင်မင်းသားလက်ချက်ဖြင့် ကင်းဝန်မဟာမင်းလှဇေယျသူမှာလည်း ကျဆုံးရလေသည်။ မင်းတုန်းမင်းလည်း လုပ်ကြံမည့်ဆဲဆဲ လွတ်မြောက်ခဲ့၍ အခင်းဖြစ်သည်ဆိုသည်နှင့် နန်းတော်သို့ ၀င်ရန်ကြိုးစားသည်။ ၀င်းအပြင်သို့အရောက်တွင် မြင်ကွန်းမင်းသားက လုပ်ကြံရန် တာဝန်ပေးထားသော ရွှေဓားဗိုလ် ငပိုက်ကြီးနှင့် တွေ့သည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် သူ့အား လုပ်ကြံရန်စောင့်နေသော ငပိုက်ကြီးကို တွေ့သည်နှင့် `ငပိုက်ကြီး ငါ့ကိုပို့စမ်း´ဟု အမိန့်ပေးသည်။ ငပိုက်ကြီးသည် မင်းတုန်းမင်း၏ အမိန့်ပေးသံကို ကြားသည်နှင့် သူ၏ တာဝန်ကို မေ့လျော့သွားသည်။ သူလုပ်ကြံရမည့် မင်းတုန်းမင်းကို ချီပိုးပြီး နန်းတော်စီသို့ ခတ်သုတ်သုတ်လျှောက်သည်။ မိဖုရားခေါင်ကြီးကို ကုလားပျိုသေနတ်စာရေး မောင်ခြုံက ချီပိုးပြီး ပို့ရသည်။ မက္ခရာမင်းသားမှာ နောက်လိုက်နောက်ပါများနှင့် အတူ ဖခင်မင်းတရားကို ကာကွယ်ပြီးလိုက်သည်။ လမ်းခရီးတွင် အနောက်ဝန်ဦးတက်တူကို မြင်းနှင့်တွေ့သည်။ မင်းတုန်းမင်းသည် ထိုမြင်းပေါ်သို့ပြောင်းစီးပြီး ခရီးဆက်ကာ နန်းတော်သို့ မြို့တော်မြောက်ဘက် ပန်းဦးတံတားမှ ဘေးကင်းစွာ ၀င်နိုင်ခဲ့သည်။ ၀န်ကြီးဦးရန်ဝေးမှာလည်း တပ်တော်နှင့် တွေ့ပြီး နောက်ကလိုက်ပါလာသည်။
မင်းတုန်းမင်း ရွှေနန်းတော်သို့ ၀င်ရောက်သွားချိန်တွင် မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင်မင်းသားတို့သည် ယာယီနန်းတော်အတွင်း မွှေနှောက်ပြီး ခမည်းတော်ကို လိုက်လံရှာဖွေသည်။ စံနန်းတော်တွင် မတွေ့ရသည့်အခါ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လာပြီး (ရွှေကျွန်းပိုင်ကျွန်းလွန်ခါမှ ပျိုတားနိုင်ရိုးလား) ဟူသော တပေါင်သီချင်းများကို ဟစ်အော်ကြွေးကြော်ရင်း ရွှေမြို့တော် ဦးထိပ်တံခါးမှ မြို့အတွင်းသို့ ၀င်သည်။ မြို့အတွင်းသို့ရောက်သည်နှင့် ရွေးတော်ယူတံခါးမှ သစ်တပ်အတွင်းသို့ ၀င်ရန်အားထုတ်ကြသည်။ ရွေးတော်ယူတံခါးတွင် နတ်ရှင်ရွေး သေနတ်ဗိုလ် မောင်စို တပ်နှင့် ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်သည်။ သေနတ်ဗိုလ်တပ်က မြင်ကွန်းတပ်ကို မတားနိုင်သဖြင့် ဆုတ်ခွာရာ ရွေးတော်ယူတံခါး ပွင့်သွား၏။ မြင်ကွန်းမင်းသား၏ အမိန့်နှင့် နောက်လိုက် တပ်သားများက လွှတ်တော်ကို ၀င်စီးသည်။ လွှတ်တော်အတွင်းရှိနေသော မကွေးမြို့စားဝန်ကြီး သတိုးမင်းကြီး မဟာမင်းလှ သီဟသူ၊ ၀န်ထောက်ကျောက်ရဲ မြို့စားမင်းကြီး မင်းခေါင်သီဟသူ၊ အသည်ဝန်ထောက်မင်းကြီး မဟာသီဟသူရ၊ ၀န်ကြီးဦးကြာနုနှင့် မှူးမတ်များ အဖမ်းခံကြရသည်။
မြင်ကွန်းမင်းသား၏ တပ်သည် တံခါးနီကို စီးနိုင်ရန် ကြိုးစားသည်။ တံခါးနီပေါက်လျှင် နန်းတော်သို့ရောက်ပြီ။ ထိုအခါ ရာဇပလ္လင်သည် မိမိတို့ လက်ဝယ်သို့ ရောက်မည်။ တံခါးနီမှနေ၍ မက္ခရာမင်းသားနှင့် ပခန်းဝန်ကြီးတို့ ဦးစီးသောတပ်များက ရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန် ပြန်လည်ခုခံသည်။ မြင်ကွန်းမင်းသားသည် မက္ခရာမင်းသားကို စည်းရုံးရန်ကြိုးစားသည်။ မက္ခရာမင်းသားက `ငါ့ဗိုက်ထဲမှာ ခမည်းတော်ရဲ့ ထမင်းရှိတယ်´ ဟုဆိုပြီး ပြန်လည်ခုခံသည်။ မြင်းခုန်တိုင်မင်းသားသည် နန်းတွင်းသို့ အလွယ်တကူမ၀င်နိုင်သဖြင့် လွှတ်တော်ကို မီးရှို့ရန် မြင်ကွန်းမင်းသားအား အကြံပေးသည်။ မြင်ကွန်းမင်းသားက နန်းတော်ထဲမှာ မယ်တော်ရှိနေ၍ ညီတော်၏ အကြံကိုလက်မခံပေ။ မင်းသားညီနောင်တို့သည် ပုရပိုက်တွင် မြို့နန်းတစ်ခြမ်းကို ရပြီ၊ ခမည်းတော်သဘောထားကို သိလိုသည်ဟု စာရေး၍ ပိုးနီပုဝါရစ်ပတ်ကာ တံခါးနီအတွင်းသို့ ပစ်ချသည်။ ထိုစာကို တံခါးနီအမှုထမ်း ငရေချမ်းမှတစ်ဆင့် မင်းတုန်းမင်းကိုယ်တော်တိုင်ဖတ်ပြီး ငါ့ကိုရန်မပြုနှင့် ဟုစာရေးကာ ပုဝါနီရစ်ပတ်ပြီးလျှင် မြင်ကွန်းညီနောင်တို့၏ မိခင် တောင်ရွှေရေးမိဖုရားအား အပို့လွှတ်သည်။
မင်းသားညီနောင်တို့သည် စာကိုအရေးမထားဘဲ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်သည်။ ထိုစဉ် ကနောင်မင်းသား၏တပ်များက ကနောင်မင်းသားကွယ်လွန်သည်ကို မသိဘဲ ၎င်း၏သခင်ကိုရှာရန် နန်းတော်သို့ ချီတက်လာကြသည်။ မြင်ကွန်းမင်းသား၏ တပ်များသည် ကနောင်မင်း၏ တပ်များလာသောအခါ ထွက်ပြေးကြရသည်။ အသာစီးရနေသော မြင်ကွန်းမင်းသားတပ်များသည် တခဏအတွင်းမှာပင် အရေးနိမ့် သွားကြသည်။ တိုက်ပွဲတွင် မြင်ကွန်းမင်းသားဘက်က အထိနာပြီး အနောက်ရုံးဘက်တွင် သွားရောက်စုရုံးစဉ် မင်းတုန်းမင်းအား လွှတ်ပေးလိုက်သော ငပိုက်ကြီးကို တွေ့သည်နှင့် မြင်ကွန်းမင်းသားက အဆုံးစီရင်လိုက်သည်။ အနောက်ရုံးမှနေ၍ တစ်ညလုံး နန်းတော်သို့ သေနတ်စိန်ပြောင်းများဖြင့် ပစ်ခတ်သည်။ မင်းတုန်းမင်းတပ်က နန်းတော်မှနေ၍၎င်း ကနောင်မင်းသားတပ်က သစ်တပ်အပြင်မှနေ၍၎င်း တိုက်ခိုက်သဖြင့် မြင်ကွန်းတပ်သည် ည သုံးချက်တီးကျော်အချိန်၊ မြို့တောင်ဘက် `ရန်နှိမ်´တံခါးမှ ဆုတ်ခွာကာ ဆိပ်ကမ်းရှိ ဘုရင်ပိုင်ရေနန်းစကြာ သင်္ဘောနှင့် အောက်ပိုင်း မလွန်အရပ်ကို စုန်ပြီးပြေးကြသည်။ လမ်းခရီးတွင် မြို့ရွာများကို တိုက်ခိုက်ကာ ရွှေငွေရတနာပစ္စည်းများကို သိမ်းယူသည်။ မြင်ကွန်းမင်းသားနှင့် အပေါင်းအပါတို့သည် မြင်းခြံတွင်လူစုကာ နေပြည်တော်ကို တိုက်ခိုက်ရန်ကြံသော်လည်း မအောင်မြင်။ မြင်ကွန်းမင်းသားတို့ကို ဖမ်းဆီးရန်အတွက် အတွင်းဝန် ရေနံချောင်းမြို့စား မင်းကြီး မဟာမင်းလှကျော်ခေါင်ကို လက်နက်လူသူအပြည့်နှင့် မြနန်းစကြာ သင်္ဘောဖြင့် လိုက်စေသည်။ သို့သော် မြင်ကွန်းမင်းသားအဖွဲ့သည် အင်္ဂလိပ် အစိုးရပိုင်နယ်မြေထဲသို့ ဆုတ်ခွာသွားပြီး လွတ်မြောက်သွားခဲ့သည်။
* မြင်ကွန်းမင်းသား ညီနောင်နှင့်အတူ မိခင် တောင်ရွှေရေးမိဖုရားလည်း ပါသွားလေသည်။
မြင်ကွန်းမင်းသား ညီနောင်တို့သည် နောက်လိုက်အခြွေအရံ အနည်းငယ်နှင့် ရန်ကုန်သို့ ထွက်ခွာလာရာ အလွန်မောပန်းတော်မူသဖြင့် တောစပ်တစ်ခု၌ အိပ်ပျော်နေစဉ် နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်တို့က မလွတ်တမ်း အစောင့်အကြပ် ပြင်းထန်စွာဖြင့် ဖမ်းဆီးပြီးလျှင် အလွန်ကျဉ်းမြောင်းလှသော အချုပ်အနှောင်တို့ဖြင့် ကပ္ပလီကျွန်းသို့ ပို့လေသည်။ ထိုမြို့၌လည်း စိတ်မချရသေးသဖြင့် ကာလကတ္တားသို့ ၎င်း၊ ထိုမှတဆင့် ချူနာမြို့သို့၎င်း၊ တဖန် ဗာရာဏသီမြို့သို့ ၎င်း ပို့ဆောင်ကာ မည်သည့်ကိုမျှ ထွက်ခွင့် မပြုတော့ချေ။
* ကနောင်မင်းသား လုပ်ကြံခံရသောနေ့မှာပင် ကနောင်မင်းသား၏ သားတော်ကြီး ပန်းထိမ်းမင်းသားက နောက်လိုက်များနှင့် ရွှေဘိုသို့ ထွက်သွား၍ နေပြည်တော်ကို ပုန်ကန်သော ပန်းထိမ်းမင်းသား အရေးအခင်းဖြစ်လာလေသည်။
ကနောင်မင်းသားကို လုပ်ကြံခဲ့သော မြင်ကွန်းမင်းသားသည် တိုင်းတပါးသို့ ရောက်ရှိနေသော်လည်း အာဏာသိမ်းမည့်အကြံအစည်ကို မလျှော့ဘဲ ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ရန် ကြိုးစားသည်။ ဗာရာဏသီရှိ အကျယ်ချုပ်ခံထားရသော စံအိမ်မှ မြင်ကွန်းမင်းသားသည် သူ၏ အ၀တ်ဟောင်းများကို လာယူလျှော်ဖွတ် ပေးသော ဒိုဘီကြီးကို ဖမ်းစီး၍ ဒိုဘီကြီး၏ အ၀တ်များကိုဝတ်ဆင်ပြီး အ၀တ်ဟောင်းထုပ်ကို ခေါင်းတွင်ရွက်ကာ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက် သွားလေသည်။ ထို့နောက် ကုန်သည်တစ်ယောက်၏ အခိုင်းအစေကူလီအဖြစ် ပြင်သစ်အပိုင် ချန္ဒရာနဂိုမြို့သို့ အရောက်သွားပြီး ပြင်သစ်အစိုးရထံ ခိုလှုံသည်။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသည် ဂျပန်ပြည်မှအပြန် ကိုရီးယား၊ တရုတ်ပြည်တို့မှတစ်ဆင့် အင်ဒိုချိုင်းနားရှိ ဆိုင်ဂုံ (ယခု ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ ဟိုချီမင်းမြို့တော်)သို့ ၀င်ခဲ့သည်။ ဆိုင်ဂုံမြို့တွင် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး၏ သားတော် မြင်ကွန်းမင်းသားကြီးနှင့် ၎င်း၏ သားတော်နှစ်ပါးတို့ နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ မြင်ကွန်းမင်းသားကြီးက ဆရာတော် ဦးဥတ္တမအကြောင်းကို သတင်းစာများမှတစ်ဆင့် ကြားသိပြီး ဖြစ်ရာ အလွန်တွေ့ချင်နေသည်။ ထို့နောက် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ ဆိုင်ဂုံမြို့သို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း သိလျှင် သိချင်း မြင်ကွန်းမင်းသားကြီးက ဆရာတော်အားပင့်၍ ဆွမ်းကျွေးခဲ့သည်။ ဆရာတော် ဆွမ်းဘုဉ်းပေးနေစဉ် မြင်ကွန်းမင်းသားကြီးက အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော် ရာဇပလ္လင်ပေါ် ဖင်မထိုင်ရသမျှတော့ မြန်မာပြည်ကို မပြန်တော့ဘူးဟု လျှောက်ထားရာ ဆရာတော်က ဒကာကြီး၊ ခဲတစ်လုံးကို ရေထဲချက အသံမြည်ပါလိမ့်မည်၊ မြန်မာပြည်ကတော့ အသံမြည်တော့မည် မဟုတ်ပေ ဟု မိန့်တော်မူရာ မြင်ကွန်း မင်းသားကြီးမှာ မျက်ရည်များပင် ကျရှာခဲ့သည်ဟု ဆို၏။
သာယာဝတီမင်းခေါ် ရွှေဘိုမင်းလက်ထက်၊ အမရပူရနန်းမြို့အတွင်း မင်းတုန်းမင်းသားနှင့် ကနောင်မင်းသားတို့ ညီနောင် စံတော်မူသည့် ၀င်းနှစ်ဝင်းမှာ ကပ်လျှက်ရှိသည်။ သို့ဖြစ်၍ ကနောင်မင်းသား ကိုယ်လုပ်တော် ဆောင်ရသခင်ကြီး (ခင်ဖွားကြီး)၏ အဆောင်နှင့် မြင်ကွန်းမင်းသား၏ မယ်တော်အဆောင်တို့မှာ နီးကပ်သည်။ မြင်ကွန်းမင်းသားမှာ ငယ်စဉ်က ပန်းနာရင်ကျပ်ရှိသဖြင့် မအိပ်ရ၍ ခင်ဖွားကြီးက ထိန်းရ၊ ပြုစုရသည်ဟု ဆိုသည်။ ထို့ကြောင့် မြင်ကွန်းညီနောင် လက်ချက်နှင့် အိမ်ရှေ့မင်း နတ်ရွာစံရသောအခါ ခင်ဖွားကြီးသည် မြင်ကွန်းမင်းသားကို အလွန်စိတ်နာသည်ဟု အိမ်ရှေ့တော်ဆက်များက ပြောကြသည်။
၁၉၀၈-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁၄)ရက်တွင် မြင်ကွန်းမင်းသား၏ မိခင် တောင်ရွှေရေးမိဖုရားသည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဆေးဂုံမြို့ (ယခု-ဟိုချီမင်းမြို့)၌ ကွယ်လွန်သည်။
၁၉၂၁-ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၀)ရက်တွင် မြင်ကွန်းမင်းသားကြီး (၁၈၄၂-၁၉၂၁)သက်တော် (၇၉)နှစ်သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းမြို့၌ ကံကုန်သည်။
ပန်းထိမ်းမင်းသား အရေးအခင်း---From Myanmar Online Encyclopedia
ပန်းထိမ်းမင်းသားသည် အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသားနှင့် ကိုယ်လုပ်တော် ရှင်ကျေး မှ မွေးဖွားသော သားတော်ကြီးဖြစ်သည်။ မောင်နှမ ငါးဦးရှိသည်။
1. ပန်းထိမ်း မင်းသား (ငယ်မည်=မောင်ညို)
2. တောင်ညို မင်းသမီး (မြင်ကွန်းမင်းသား၏ မိဖုရား)
3. ရန်အောင်မြင် မင်းသမီး
4. စမ္ပယ်နဂိုရ် မင်းသမီး (ကနောင်မင်းသား၏ အချစ်ဆုံးသမီးတော်)
5. တိုင်တား မင်းသားတို့ ဖြစ်သည်။
မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင် အရေးအခင်းကြောင့် အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသား ကံတော်ကုန်သည့်နေ့မှာပင် အိမ်ရှေ့အတွင်းဝန် ဦးသင်၏ မြှောက်ပေးမှုကြောင့် ပန်းတိမ်းမင်းသားနှင့် နောက်လိုက်မင်းသားများသည် ရွှေဘို(ရတနာသိင်္ဃ)သို့ ထွက်ခွာသွားကြသည်။ ပန်းတိမ်းမင်းသားသည် ရွှေဘိုမသွားမီ ရတနာပုံရွှေမြို့တော်၏ အနောက်မြောက်ရှိ ကနောင်မင်းသား တည်သောစက်ရုံများသို့သွားရောက်ပြီး ညီတော်ကြေးမြင့်မင်းသား၊ တိုင်တားမင်းသား၊တောင်ပုံမင်းသားတို့ကို စောင့်စား၍ စက်ရုံရှိ အလုပ်သမားများကို စည်းရုံးလေသည်။ နောက်လိုက်နောက်ပါများနှင့် မတ္တရာမှတဆင့် ရွှေဘို(ရတနာသိင်္ဃ)သို့ ထွက်ခွာလေသည်။ ရွှေဘိုမှနေ၍ လက်နက်အင်အား၊ လူအင်အားစုကာ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးအား ပုန်ကန်ရန် ကြံစီခြင်းကို ပန်းထိမ်းမင်းသား အရေးအခင်းဟု ခေါ်ဆိုသည်။ ကနောင်မင်းသား၏ သားတော်များ ဖြစ်ကြသော ပန်းတိမ်းမင်းသားနှင့် အတူ ကြေးမြင့်မင်းသား၊ တိုင်တားမင်းသား၊ တောင်ဆင်းမင်းသား၊ တောင်ပုံမင်းသား၊ ရွာသာမင်းသား၊ တူရွင်းတိုင်မင်းသားတို့ ပါဝင်ကြသည်။ ပန်းတိမ်းမင်းသား ရွှေဘိုသို့ထွက်ခွာသွားသောအခါ ကျန်ရှိနေသော မယ်တော်နှင့် ညီမတော်မင်းသမီးများအား နေပြည်တော်မှာ ထိန်းသိမ်းခံကြရသည်။
* အိမ်ရှေ့စံ ကနောင်မင်းသား လုပ်ကြံခံရခြင်းသည် မင်းတုန်းမင်းက မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင်မင်းသားတို့အား မြှောက်ပင့်အားပေးမှုဟု ယူဆခြင်း။
* မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင် အရေးတွင် မင်းတုန်းမင်း၏ အကြံအစီပါသည်ဟု ယူဆခြင်း။
* မင်းတုန်းမင်းသည် ကနောင်မင်းအား အိမ်ရှေ့စံ အပ်နှင်းခဲ့သည်။ ကနောင်မင်းသား ဘုရင်ဖြစ်လျှင် သားတော် ပန်းတိမ်းမင်းသားက နန်းလျာဖြစ်လာ၍ အရိုက်အရာကို ဆက်ခံနိုင်မည်။ ယခုသော် ကနောင်ကျဆုံးပြီးနောက် နန်းလျာအဖြစ် ပန်းတိမ်မင်းသား ဆက်ခံနိုင်ခွင့် မရှိတော့ခြင်း။ ထိုအကြောင်းများကြောင့် ပန်းတိမ်းမင်းသားသည် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးအား ပုန်ကန်တော်လှန်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ပန်းတိမ်းမင်းသား ရွှေဘိုနယ်သို့ သွားရခြင်းမှာ-
* ရွှေဘိုနယ်သည် အလောင်းဘုရားလက်ထက်က အောင်မြေဖြစ်ခဲ့ခြင်း။
* ရွှေဘိုနယ်သည် ဖခင်ကနောင်မင်းသားကြီး စားရသောနယ်ဖြစ်ခြင်း၊ မိမိအား ထောက်ခံအားပေးကူညီမည့်သူ ပေါများခြင်း။
* ပုဂံမင်းလက်ထက်တွင် မင်းတုန်းမင်းနှင့် ကနောင်မင်းသားတို့က ရွှေဘိုသို့သွားကာ အင်အားစု၍ ပုန်ကန်တော်လှန်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ပန်းတိမ်းမင်းသား၏ တပ်မတော်သည် ရွှေဘို၌ လူအင်အား လက်နက်အင်အား တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးတက်များပြားလျှက်ရှိနေသည်။ နေပြည်တော်ရှိ မင်းတုန်းမင်း၏ ဘုရင့်တပ်မတော်သည် မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင် အရေးတော်ပုံတွင် အထိနာခဲ့သဖြင့် အင်အားလျော့ပါးလျှက်ရှိသည်။ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးအနေဖြင့် ပန်းတိမ်းမင်းသားအပေါ် ညှာတာထောက်ထားသော စိတ်ရှိကြောင်း၊ အချိန်မီ ရတနာပုံနေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပါက အပြစ်အမျိုးမျိုးကို ခွင့်လွှတ်၍ နေမြဲအရာကို ပြန်လည်ချီးမြှင့်မည်ဟု သံတမန်စေလွှတ်၍ အကြောင်းကြားသည်။ ပန်းတိမ်းမင်းသားနှင့် အပေါင်းပါများက မင်းတုန်းမင်း၏ သံတမန်ကမ်းလှမ်းချက်ကို ပယ်ချလိုက်သည်။ ပန်းတိမ်းမင်းသားအနေဖြင့် ရတနာပုံ မြို့တော်သို့ ချီတက်တိုက်ခိုက်လျှင် မုချအောင်မြင်မည်ဟု ထင်ထားသည်။ မင်းသားသည် အချိန်အခါကို အခွင့်ကောင်းယူကာ သူပုန်တပ်မတော်ကြီးကို ဦးစီး၍ နေပြည်တော်သို့ တစ်ရှိန်ထိုး ချီတက်ခဲ့လေသည်။
မင်းတုန်းမင်းအနေဖြင့် သူပုန်တပ်ကို ရင်ဆိုင်နှိမ်နှင်းရန် စိတ်ဓာတ်အင်အား များစွာလျော့ပါးလျှက်ရှိနေသည်။ ပန်းတိမ်းမင်းသားကို ထီးနန်းလွှဲပေးရန် ဆန္ဒရှိသည်ဟု သတင်းထွက်လာသည်။ ထိုအခါ မိဖုရားများက မင်းတုန်းမင်း၏ အကြံကို လက်မခံနိုင်ပေ။ ပုန်ကန်လာသော မင်းသားကို ထိထိရောက်ရောက်ကွက်မျက်နှိမ်နှင်းရန် ရှိကြောင်း အကြံပေးကြသည်။ ထို့ကြောင့် မင်းတုန်းမင်းသည် ခုခံနှိမ်နှင်းရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်။ သူပုန်တပ်မတော်ကို နှိမ်နှင်းရန် သားတော်မင်းသားများနှင့် စည်းဝေးဆုံးဖြတ်လေသည်။ မက္ခရာမင်းသား၊ ညောင်ရမ်းမင်းသားနှင့် သုံးဆယ်မင်းသားတို့ကို ဘုရင့်တပ်မတော်ကို ဦးစီး၍ တိုက်ခိုက်စေသည်။
တိုက်ပွဲတွင် ဘုရင့် တပ်မတော်က ရွပ်ရွပ်ချွန်ချွန် ခုခံတိုက်ခိုက်ကြသည့်အတွက် ရေရှည်စစ်ကို ဆင်နွဲလာသောအခါ ပန်းတိမ်းမင်းသား တပ်များသည် မခံနိုင်ဖြစ်လာသည်။ လက်နက်ခဲယမ်း မီးကျောက်အင်အား တဖြည်းဖြည်း နည်းပါးလာသဖြင့် ဘုရင့်တပ်မတော်ကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိလာသည်။ ထို့ကြောင့် ဧရာဝတီမြစ်ကြောင်းအတိုင်း ဆန်တက်ကာ ကျောက်မြောင်းသို့ ဆုတ်ခွာခဲ့လေသည်။ ညောင်ရမ်းမင်းသား ဦးစီးသော ဘုရင့်တပ်မတော်က ကျောက်မြောင်းအထိ လိုက်လှန်တိုက်ခိုက်လေသည်။ ပန်းတိမ်းမင်းသား၊ ညီတော် တိုင်တားမင်းသားနှင့် အပေါင်းပါများသည် ကျောက်မြောင်းတွင် အဖမ်းခံရပြီး နေပြည်တော်တွင် အကျဉ်းချထားခံရသည်။
အကျဉ်းချထား ခံရစဉ် ပန်းတိမ်းကိုယ်တော်လေးနှင့် မင်းသားငယ်များက ထောင်ထဲမှနေ၍ နှမတော် ရန်အောင်မြင် မင်းသမီးနှင့် ပူးပေါင်း၍ နောက်ထပ်ပုန်ကန်ရန် ကြံစီသည်ဟု အတွင်းတော် ၀န်ကြီးများက စွပ်စွဲလေသည်။ ထို့ကြောင့် လွှတ်တော်က စီရင်ချက်ချကာ သူပုန်မင်းသား အားလုံး ကွက်မျက်စေသည်။
ကွက်မျက်မည်ဆဲဆဲတွင် မင်းတုန်းမင်းဆီ သတင်းရောက်သွားသည်။ မင်းတုန်းမင်းတရားကြီး အနေဖြင့် သူ့အမှားများကို သူသိပြီး မင်းသားများအပေါ် မရက်စက်နိုင် ဖြစ်ခဲ့ကာ အားလုံးလွှတ်ရန် အမိန်ပေးလိုက်လေသည်။ သို့သော် အမိန့်ရသောအချိန်၌ ပန်းတိမ်းမင်းသားအား ကွက်မျက်ပြီးဖြစ်နေသည်။ တိုင်တားမင်းသားနှင့် အခြားမင်းသားများ အသက်ချမ်းသာရာ ရကြလေသည်။
1. ↑ မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်)၏ ကုန်းဘောင်ရှင်းတမ်း2. ↑ တက္ကသိုလ်စိန်တင်၏ ငွေဓားဗိုလ်
Posted by leoninedragon at 3:28 AM No comments:
အမျိုးသမီး အာဇာနည် ကျောက်ဆည် ဒေါ်မြရီ
အမျိုးသမီး အာဇာနည် ကျောက်ဆည် ဒေါ်မြရီ-From Myanmar Online Encyclopedia
၂ဝဝ၈ အောက်တိုဘာ ၅ နေ့က မိုးမခ ကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ လွှင့်တင်ထားတဲ့ ကြည်ကိုလွင် (ကျောက်ဆည်) ရဲ့ "အသက် ၉ဝ ပြည့် အမျိုးသမီး အာဇာနည် ကျောက်ဆည် ဒေါ်မြရီ" အကြောင်းကို ပြန်လည် ကူးယူ ဖော်ပြလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ပုံလွှာ အဖွဲ့အနွဲ့ရဲ့ မူလပထမ ပါရှိတဲ့ မဂ္ဂဇင်းကတော့ ကလျာ၊ ဧပြီ ၂ဝဝ၈ ထုတ်ဖြစ်တယ်လို့ မိုးမခ ကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမျိုးသမီး အာဇာနည် ကျောက်ဆည် ဒေါ်မြရီ။
၂ဝဝ၈ ဧပြီလ ၁၁ ရက်၊ သောကြာနေ့ ဒေါ်မြရီ (ကျောက်ဆည်) အသက် ၉ဝ နှစ် တင်းတင်းပြည့်လေပြီ။
ပေါင်ကျိုးထားလို့ လမ်းတော့ မလျှောက်နိုင်ပါ။ ကျန်းမာရေးကတော့ ကောင်းတုန်း၊ စားနိုင်၊ သောက်နိုင်ပြီး မှတ်ဉာဏ်လည်း သိပ်ကောင်းပါတယ်။ အိပ်ချိန်ကလွဲရင် ကြိမ်ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ပြီး စာဖတ်၊ တရားမှတ်၊ ပုတီးစိပ်နဲ့ အချိန်ကို ကုန်လွန်စေပါတယ်။နိုင်ငံရေး စိတ်ဝင်စားသူများ အတွက်တော့ သက်ရှိ ရာဇဝင် အဘိဓာန်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာ မေးမေး မေ့နေပြီလို့ ဘယ်တော့မှ မပြော၊ ဒိုးခနဲ ဒေါက်ခနဲ ချက်ချင်း ပြောနိုင်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာ 'အမေရီ' လို့ အားလုံးက ခေါ်ကြတဲ့ မမြရီကို ၁၁-၄-၁၉၁၈ နေ့က ကျောက်ဆည်မြို့ ဈေးတန်းရပ် နေအိမ်မှာ အဘ ဦးစံသိန်း၊ အမိ ဒေါ်ဇုံတို့က မွေးဖွားပါတယ်။ မွေးချင်း သုံးယောက်မှာ အကြီးဆုံး ဖြစ်ပြီး ညီမတယောက်၊ မောင်တယောက် ရှိပြီး ယခု အမေရီ တယောက်သာ သက်ရှိထင်ရှား ရှိပါတော့တယ်။ သား ၂ ယောက်၊ သမီး ၂ယောက်ရှိပြီး၊ သား ဦးကိုစိုးသိန်း ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။
ဒေါ်မြရီ အသက် ၂ဝ နှစ်မှာ မူလတန်း ကျောင်းဆရာမ လုပ်ပါတယ်။ ဈေးတန်းရပ်ကွက်မှာ ဒို့ဗမာ အစည်းအရုံး စထောင်တော့ သခင် ဗရွှေကြီး၊ သခင် ဗရွှေလေး၊ သခင် ရွှေအုပ်၊ သခင် တင်ရွှေ၊ သခင် သန်းမြိုင်၊ သခင် ချစ်သိန်း၊ သခင်ချိန်၊ သခင် ထွန်းတင်၊ သခင် ဗအုံး၊ သခင်သောင်း၊ သခင် စံရွှေ၊ သခင်မ မသန်းမှီတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်မြရီက ဝန်ထမ်း ကျောင်းဆရာမ ဆိုတော့ သခင်အမည် မခံပါဘူး။ သခင်တွေ အစည်းအဝေး လုပ်တဲ့အခါ တိတ်တဆိတ် နားထောင်ပြီး စာစောင်တွေ ကူးပေး၊ ဆောင်းပါးတွေရေး လုပ်ပါတယ်။ ကလောင်အမည်က 'မြဝတ်ရည်'နဂါးနီ အသင်းဝင် တယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်မြရီရဲ့ နိုင်ငံရေး အစပေါ့။ သည်လိုနဲ့ 'သခင် တင်ရွှေ' ကို စတွေ့ပြီး ရည်းစား ဖြစ်ကြတာပါပဲ။
မမြရီ ပင်တလည် ကျေးရွာမှာ နေထိုင်တုန်း ၁၉၄၂ မေလ ၁၁၊ ၁၂ ရက်မှာ ဂျပန်တွေ ရွာထဲဝင်လာပြီး အမျိုးသမီးတွေကို စော်ကား၊ ပစ္စည်းယူ၊ လူသတ် လုပ်နေတာတွေကို ကိုယ်တွေ့ မြင်ရတဲ့အခါ နယ်ချဲ့ ဖက်ဆစ် အပြုအမူကို ရွံရှာ မုန်းတီးခဲ့ပါတယ်။ ဘီအိုင်အေ (B.I.A.) တပ်မတော်က ဂျပန်ကို တော်လှန်ဖို့ လှုံ့ဆော် စည်းရုံးနေချိန်မှာ ဒေါ်မြရီကိုယ်တိုင် ဂျပန် တော်လှန်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို လျှိုဝှက်စွာ လက်လှမ်းမီသလောက် လုပ်ကိုင် ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘီအိုင်အေကနေ ဘီဒီအေ (B.D.A.) ပြောင်းချိန်မှာ ကျောက်ဆည်ခရိုင်မှာ ယာယီ လာရောက် စုရုံးကြတော့ ခရိုင် ရိက္ခာ တာဝန်ခံ အဖြစ်ရော တပ်သား စုဆောင်းရေး တာဝန်တွေကို ယူခဲ့ပါတယ်။
ခရိုင်ဝန် (ဦးဘုံဂွမ်) လက်ထက်မှာ ဒေါ်မြရီက အာရှလူငယ် ခရိုင် အမျိုးသမီး ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်က ရိပ်မိသွားတော့ ဒေါ်မြရီ ကျောက်ဆည်မှာ လှုပ်ရှားလို့ မရတော့ပါဘူး။ မန္ဈလေးက ရဲဘော် ထွန်းစိန် (သခင်အေးမောင်) က လာခေါ်လို့ သခင် တင်မြနဲ့ စတွေ့ကြပါတယ်။ သခင် တင်မြနဲ့ ဒေါ်မြရီ မန္ဈလေး၊ အမရပူရ၊ စစ်ကိုင်းနယ်များကို သွားပြီး ဖက်ဆစ် ဂျပန် တော်လှန်ရေး သင်တန်းတွေကို လျှို့ဝှက်ပြီး ပို့ချကြပါတယ်။သည်လို သွားလာ လှုပ်ရှားနေချိန်မှာ ဒေါ်မြရီ ကိုယ်နဲ့မကွာ ဆောင်ထားတာကတော့ အဆိပ် တပုလင်းနဲ့ ဓားမြှောင် တလက်ပါပဲ။ မတော်တဆ ဂျပန် ဖမ်းမိသွားရင် စော်ကားရင် ဓားမြှောင်နဲ့ ထိုးမယ်၊ ပြီးရင် အဆိပ်သောက် သေလိုက်မယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ပါ။
မမြရီနဲ့ ရည်းစား သခင် တင်ရွှေက သခင် သိန်းဖေ (သိန်းဖေမြင့်) နှင့် အတူ နှစ်ယောက်သား အိန္ဒိယကို ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးအတွက် မဟာမိတ်နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး လေထီး သင်တန်းပေးဖို့ မဟာမိတ်က မြန်မာပြည်က ရဲဘော်တွေကို လွှတ်ပေးဖို့ သခင် သိန်းဖေကို အပေါင်အဖြစ် ထားခဲ့ပြီး သခင် တင်ရွှေ တယောက်တည်း မြန်မာပြည်ကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ၁၉၄၃ ခု၊ အမျိုးသား အောင်ပွဲနေ့မှာပါ။
သခင် တင်ရွှေက အင်္ဂလိပ် စစ်ယူနီဖောင်း ဝတ်ပြီး ဒေလီကနေ ကာလကတ္တား၊ နောက် စစ်တကောင်း အထိ မီးရထားစီးပြီး စစ်တကောင်းကနေ ဒက်စတွိုင်းယား စစ်သင်္ဘောနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် သံတွဲနဲ့ ဘောမိစပ်ကြား ဂွမြို့အနီး ပင်လယ်ကမ်းခြေ အထိ အရောက် ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။ သင်္ဘောကနေ လှေငယ်တဆင့် စီးရပါသေးတယ်။ အင်္ဂလိပ် ရေတပ်သား နှစ်ယောက်က လှော်ခတ်ပြီး ပြန်လာမဲ့ အချိန် နေ့ရက်ကို ပြောကြပြီး သခင် တင်ရွှေ မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ဂွမြို့အနီး တောလမ်းကနေ ကုန်သည်တွေနဲ့ ရောလိုက်လာပြီး ငါးသိုင်းချောင်းကို ရောက်လာပါတယ်။ မီးရထား အဆင့်ဆင့် စီးပြီး ရန်ကုန်ကို ရောက်၊ သခင် သန်းထွန်းနဲ့တွေ့၊ နောက် သခင်စိုး ရှိရာ ကျိုက်လပ်မြို့နယ် ညောင်ချောင်းရွာကို ရောက်သွားပါတယ်။ အပြန်ခရီးမှာ ဝါဒဖြန့်ချိရေး အတွက် အမျိုးသမီး တဦးလည်း လိုနေတယ် ဆိုတော့ ကျောက်ဆည် မမြရီကို လှမ်းခေါ် လိုက်ပါတယ်။ သည်အစီအစဉ်ကို ဒေါ်မြရီ မသိပါဘူး။ အိန္ဒိယကို သွားဖို့ စီစဉ်ထားတာက သခင် ဗဟိန်းနှင့် သူ့ဇနီး ဒေါ်ခင်ကြီး ဖြစ်ပေမဲ့ သခင် ဗဟိန်း ကျန်းမာရေး မကောင်းလို့ မလိုက်ဖြစ်တော့ဘဲ ဒေါ်မြရီကို လှမ်းမှာ လိုက်ရတာပါ။
ကျောက်ဆည်ကနေ ဒေါ်မြရီကို သခင် တင်မြက ခေါ်လာခဲ့ပြီး ရန်ကုန်က အိမ်တအိမ်မှာ ထားရစ်ခဲ့ပြီး သခင် သန်းထွန်းနဲ့ သွားတွေ့ပါတယ်။ ပြန်လာမှ သခင် တင်ရွှေ မြန်မာပြည် ရောက်နေကြောင်း ပြောပြရပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ သခင်နု ဇနီး ဒေါ်မြရီထံမှာ ကျောက်ဆည် မမြရီက လက်ကောက် ရောင်းပါတယ်။ ဂျပန်ငွေ ၄ဝဝ နဲ့ပါ။ နောက်တော့ လိုအပ်တဲ့ အဝတ်အစားတွေ ဝယ်ပေါ့။ သည်အချိန် ကာလက အထည်ကောင်းကောင်း ဝတ်နိုင်သူက ဂျပန်ကတော်တွေလောက်သာ ရှိတာ ဆိုတော့ ဒေါ်မြရီကို မေးငေါ့ကြတာပေါ့။ ဒေါ်မြရီ ဒေါသ ဖြစ်ရတာပေါ့။ ရှင်းပြလို့လည်း ရတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်တော့ ခံလိုက်ရပါတယ်။
ရန်ကုန်ကနေ ကျိုက်လပ်မြို့နယ် သခင်စိုး ရှိရာကို လူမသိအောင် သမ္ဗာန်တစင်းကို ဂျပန်ငွေ ၄ဝ နဲ့ ငှားပြီး သွားကြပါတယ်။ သခင် တင်မြကို သမ္ဗာန်ထဲ ထားခဲ့ပြီး 'မုန့်ဟင်းခါး စားမယ်' ဆိုပြီး ကမ်းပေါ်အတက် မမျှော်လင့်ဘဲ သခင် သန်းမြိုင် (ကျောက်ဆည်) နဲ့ သွားတွေ့ပါလေရော။ သခင် သန်းမြိုင်က ဇွတ်ခေါ်နေလို့ 'အဖေ နေမကောင်းလို့ ဖျာပုံ သွားမလို့' ဆိုပြီး ဇွတ်ငြင်းပြီး ရှောင်ခဲ့ရတယ်။
ကျိုက်လပ်မြို့နယ် ညောင်ချောင်းရွာ တောတဲလေး တခုကို ရောက်ကြတော့မှပဲ သခင် တင်ရွှေနဲ့ တွေ့ကြပါတော့တယ်။ သမီးရည်းစား နှစ်ယောက် ကွဲကွာနေကြတာ ၂ နှစ်ခန့် ရှိသွားပါပြီ။ သခင်စိုးကပဲ လူကြီးလုပ်ပြီး ဘဲ ၅ ကောင် ချက်ပြီး မင်္ဂလာဆောင် ပေးလိုက်ပါတယ်။ သခင် တင်ရွှေ၊ မမြရီကနေ 'ရဲဘော် ဖိုးရုံ' နဲ့ 'ရဲဘော် မခင်စီ' တို့ ဖြစ်သွားကြပါတယ်။
ဖိုးရုံ၊ ခင်စီ လင်မယား နှစ်ယောက် ကျိုက်လပ်ကနေ ရန်ကုန်ကိုသွား၊ ရန်ကုန်မှာ ဦးကျော်ငြိမ်း (အာအီးတီ) နဲ့ ဗိုလ်ဗတင်တို့ အိမ်မှာ တလှည့်စီ ပုန်းပြီး နေကြပါတယ်။အပြင်ထွက်ရင် မခင်စီကပဲ ထွက်ပြီး ဖိုးရုံကတော့ အိမ်တွင်းအောင်း နေရပါတယ်။ နောက် သခင်စိုး၊ သခင် သန်းထွန်းတို့ အစီအစဉ်နဲ့ အိန္ဒိယကို ပြန်ဖို့ စီစဉ်ရပါတယ်။ ချိန်းထားတဲ့ ရက်ကလည်း နီးပြီ၊ ရခိုင်ကိုဖြတ်ဖို့ ကိုညိုထွန်းကို ရခိုင်တိုင်း မဟာဗမာ အဖွဲ့ မင်းကြီး၊ ဖိုးရုံနဲ့ ခင်စီက စာရေးလင်မယား လမ်းပြ အဖြစ်၊ ကိုကျော်ရင်က မင်းကြီးရဲ့ ရုံးအုပ် အဖြစ် ဟန်ဆောင်ပြီး သွားကြပါတယ်။ လမ်းခရီးမှာ အသုံးဝင်မဲ့ ဂျပန် ဝါဒ ဖြန့်ချိရေး စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ ဂျပန်စစ်ဖက်က ထောက်ခံစာ တခုလည်း ပါတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။မခင်စီ တဖြစ်လဲ ဒေါ်မြရီဟာ ကျောက်ဆည်မှာတုန်းက ဂျပန်စာ၊ ဂျပန်စကား အနည်းငယ် တတ်ထားတော့ ပိုပြီး အဆင်သွားပါတယ်။
ညားကာစ လင်မယား ဖိုးရုံနဲ့ ခင်စီတို့ အတွက် ပျားရည်ဆမ်း ခရီးကတော့ ရခိုင်ရိုးမကို ခြေကျင်ဖြတ်ပြီး 'ဂွမြို့' နားက မန်ကျည်းစင်ကို အရောက် သွားကြခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာမိတ် စစ်သင်္ဘောနဲ့ ချိန်းထားတဲ့ ရက်ထက် ၄ ရက်လောက် စောရောက် နေကြတာပါ။ ကိုကျော်ရင်က သံတွဲသား ဆိုတော့ ဂွမြို့ တဝိုက် က္ဆွမ်းကျင်တဲ့ လမ်းပြအဖြစ် ကုန်သည် ကိုသန်းမောင်ကိုလည်း ခေါ်ခဲ့ရ ပါသေးတယ်။ချိန်းထားတဲ့ရက် ရောက်တော့ ပင်လယ် ကမ်းခြေမှာ ဂျပန်က သုံးယောက်တတွဲ ကင်းလှည့် နေကြလို့ အမှောင်ထဲမှာ ခြောက်လုံးပြူး ကိုင်ပြီး ပုန်းနေကြရ ပါသေးတယ်။ 'ဘောမိချိုင်' ကမ်းခြေမှာပါ။ ည ၁ဝ နာရီခွဲ ကင်းတွေ ရုပ်သွားမှ သခင် တင်ရွှေက ပင်လယ်ပြင်မှာ ရှိတဲ့ စစ်သင်္ဘောကို လက်နှိပ်ဓာတ်မီးနဲ့ အချက်ပေး လိုက်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာပဲ ရော်ဘာလှေလေး တစင်း ဆိုက်လာပါတယ်။ ကိုကျော်ရင်၊ ကိုသန်းမောင်တို့ကို နှုတ်ဆက်ပြီး ကိုညိုထွန်း၊ သခင် တင်ရွှေနဲ့ ဒေါ်မြရီတို့ လှေကလေးပေါ် တက်လိုက်ကြပြီး စစ်သင်္ဘောဆီကို ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ သတို့သမီး ခမျာမှာလည်း စစ်သင်္ဘောကြီးပေါ် ရောက်မှပဲ အပန်းဖြေ နိုင်ပါတော့တယ်။ ရခိုင်ရိုးမကို ခြေကျင် ဖြတ်ခဲ့ရတုန်းက ဆိုရင် ဖိနပ်တောင် မစီးနိုင်တော့လို့ ခြေဖဝါးတွေလည်း ကွဲ၊ သွေးစိမ်းရှင်ရှင် ထွက်ပြီး အံကြိတ် လိုက်ခဲ့ရတာပါ။ တချို့နေရာတွေမှာ ဆိုရင် ကိုညိုထွန်းနဲ့ ကိုတင်ရွှေက ချိုင်းကနေ တဖက်တချက် ကိုင်ပြီး ဆွဲခေါ်ရတာပါ။ သည်လို အခါမျိုးမှာ လက်ကို ရုန်းပြီး ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်သွားမယ် ဆိုပြီး ဇွတ်အတင်းပဲ တက်လိုက် ဆင်းလိုက်နဲ့ ရိုးမကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ လွန်ခဲ့သော နှစ် ၆ဝ ကျော်က ရခိုင်ရိုးမ ဆိုတာ ဆင်တော၊ ကျားတောပါ။ လမ်းမှာတွေ့တဲ့ သဇင်ပန်း၊ သစ်ခွပန်းတွေကို အရသာခံပြီး မကြည့်အားပါဘူး။ မိန်းကလေးပဲ အသက်မှ ၂၆ နှစ်ပဲ ရှိသေးတာ၊ လှချင် ပချင်တဲ့ အရွယ်၊ သတို့သမီးငယ်ဟာ 'ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး အတွက်' ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အံခဲပြီး လိုက်လာတာပါ။စစ်သင်္ဘောကြီး အလာတုန်းက သခင် တင်ရွှေကို ပို့ပေးတဲ့ သင်္ဘောကြီးပါ။ ဒက်စတွိုင်းယား စစ်သင်္ဘောကြီးဘေးကို ကြိုးလှေကားနဲ့ တက်ရပါတယ်။ သင်္ဘောပေါ် အရောက်မှာပဲ ကုလားကြီး တယောက်က 'နေကောင်းသလား' လို့ နှုတ်ဆက်ပါတယ်။နှုတ်ဆက် အပြီးမှာပဲ ဂျပန် ဆားလှေကြီးက လှမ်းပစ်လိုက်တဲ့ သေနတ်ကျည်ဆံ ထိပြီး ကုလားကြီး နေရာတင်ပဲ သေသွားပါတယ်။ စစ်သင်္ဘောက ပြန်ပစ်လို့ ဂျပန် နှစ်ယောက် ကျသွားပါတယ်။ လှေပေါ်မှာ ပါတဲ့ ရခိုင်တွေက ဂျပန်တွေ မရှိတော့ပါဘူး ဆိုမှ အပစ်ရပ်ပြီး သင်္ဘောလည်း ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ လှေပေါ်ပါတဲ့ ရခိုင်တွေကိုလည်း တခါတည်း ခေါ်လာခဲ့ပြီး စစ်ကြီးပြီးမှ မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပို့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ဒေါ်မြရီနဲ့အတူ လိုက်ခဲ့တဲ့ ကိုညိုထွန်းက နောင်ကျတော့ သံအမတ်ကြီးဖြစ်၊ လမ်းပြ အဖြစ် လိုက်တဲ့ ကိုကျော်ရင်က ပါမောက္ခ ဦးကျော်ရင် ဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။
သင်္ဘောသုံးကြိမ် ပြောင်းစီးပြီးမှ စစ်တကောင်း ရောက်သွားပါတယ်။ စစ်တကောင်း ကနေမှ အိန္ဒိယ အလယ်ပိုင်း 'မီရတ်မြို့' ကို လေယာဉ်နဲ့ ခေါ်သွားပါတယ်။ သတို့သမီး လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့လို့ ဗြိတိသျှ စစ်သားတွေက ထမ်းတင် ပေးရပါသေးတယ်။ 'မီရတ်မြို့' ဟာ စစ်မြို့တော် ဖြစ်ပြီး သခင် သိန်းဖေ (သိန်းဖေမြင့်) နဲ့ အဲသည်မြို့မှာပဲ တွေ့ဆုံ ကြရပါတယ်။ရဲဘော်တွေ ပြန်တွေ့ဆုံကြတော့ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးထောင် ဖြစ်လို့ပေါ့ … သခင် တင်ရွှေတို့ ကောင်းစွာ ရောက်ကြောင်း မြန်မာပြည်ကို ရေဒီယို ထဲကနေ စကားဝှက်နဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
"ဖိုးရုံတို့ မိဂဒါဝုန် ရောက်ပြီ"
ဒေါ်မြရီတို့ အိန္ဒိယရောက်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ မြန်မာပြည်ကနေ ရဲဘော်တွေ တသုတ်ပြီး တသုတ် ရောက်လာကြပါတယ်။ မဟာမိတ်က ပေးတဲ့ စစ်ပညာကို အိန္ဒိယနဲ့ သီဟိုဠ် (ယခု သီရိလင်္ကာ)နိုင်ငံတွေမှာ တက်ခဲ့ရပါတယ်။ စည်းရုံးရေး ပညာ၊ ဝါဒဖြန့်ဖြူးရေး၊ ရုပ်ဖျက်နည်း၊ စကားဝှက် ရေးနည်း၊ စာလုံး မပေါ်အောင် ရေးနည်း၊ ဖတ်နည်း၊ ပျောက်ကျားတပ် ဖွဲ့နည်း၊ အချက်ပြ ဆက်သွယ်ရေး မြေပုံ ဖတ်နည်း၊ တောထဲ နေထိုင် သွားလာနည်း၊ ဂျပန်လက်အောက် မြန်မာပြည် အကြောင်းနဲ့ ဂျပန်လက်နက်များ စွဲကိုင်နည်း၊ ဆေးပညာ၊ မြေပြင်မှ နေ၍ လေယာဉ်ပျံနှင့် ဆက်သွယ်နည်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လေထီး သင်တန်းကတော့ အဓိကပေါ့။ ဘုံရိပ်သာနှင့် ဒေါ်မြရီ တာဝန်
ဘုံရိပ်သာကို စည်းကမ်းရှိအောင် စံနစ်တကျ ဖွဲ့စည်း ထားပါတယ်။ သခင် သိန်းဖေ (သိန်းဖေမြင့်) ကို အများသဘောတူ 'ဘုံရိပ်သာမှူး' အဖြစ် ထားပြီး အုပ်ချုပ် စီမံရန် ဗဟို ကလပ်စည်း တခု ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်း ထားပါတယ်။ ကလပ်စည်းမှာ ကိုသိန်းဖေ၊ သခင် မြသွင်၊ ကိုကျော်ရင်၊ ကိုအောင်မြင့်၊ ဂိုရှယ် နဲ့ ဒေါ်မြရီ (မခင်စီ) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ဘုံရိပ်သာမှာ ရဲဘော်များဟာ နေ့စဉ် နံနက် ၇ နာရီ အိပ်ရာထ၊ ကျန်းမာရေးလုပ်၊ စာဖတ်၊ ညနေနဲ့ ညများမှာ သင်တန်းတက် ဆွေးနွေး၊ ည ၁ဝ နာရီ အိပ်၊ အရက်နဲ့ အပျော်အပါး လုံးဝ ခွင့်မပြု၊ အင်္ဂါ တရက်သာ အပြင်ထွက်ခွင့် ပေးပြီး လျှောက်လည်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ ဈေးဝယ် ထွက်ရပါတယ်။
ဒေါ်မြရီဟာ ရဲဘော် အားလုံးကို ကြိုဆို နေရာ ချထားရပြီး ဈေးလည်း ဝယ်ပေးရပါတယ်။ တဦးတည်းသော အမျိုးသမီး ရဲဘော် ဖြစ်နေတာကိုး။သင်တန်းဆင်းပြီး ရဲဘော်တွေကို ဗြိတိသျှ စစ်တပ်နဲ့ တွဲပြီး မြန်မာနိုင်ငံကို တသုတ်ပြီး တသုတ် လေထီး ဆင်းစေပါတယ်။ဒေါ်မြရီ သားဦး မောင်စိုးသိန်းကို မွေးပြီး တလလောက် ကြာတော့ ခင်ပွန်း ဖြစ်သူနဲ့အတူ ကျောက်ဆည်နယ်ကို လေထီးဆင်းဖို့ အစီအစဉ် လုပ်ပါတယ်။ နောက်မှ ဒေါ်မြရီ အစား ကျောင်းဆင်းပြီးစ ဗန်းမော် ကိုကိုကြီးကို သခင် တင်ရွှေနဲ့ အတူ ကျောက်ဆည်နယ်ကို လေထီး ဆင်းစေခဲ့ပါတယ်။
၁၉၄၅ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ဂျပန် လက်နက်ချလို့ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးဆုံး သွားပါတယ်။ ၁၉၄၅ ခု၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှာ သခင်သိန်းဖေ၊ မန်းဝင်းမောင်၊ ကိုဘစော၊ မောင်ကြည်၊ သခင် တင်ရွှေ၊ ဒေါ်မြရီနဲ့ သားငယ် မောင်စိုးသိန်းတို့ အိန္ဒိယကနေ လေယာဉ်နဲ့ ရန်ကုန်ကို ပြန်ရောက်ကြပါတယ်။
စစ်ကြီးပြီးတော့ ကျောက်ဆည်မှာ ပြည့်တန်ဆာ ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ဝင်လုပ်ပြီး အမျိုးသမီး ကွန်ဂရက် ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန် ယူခဲ့ပါတယ်။ကျောက်ဆည်မြို့ ရွှေသာလျောင်း တောင်ခြေ၊ စောင်းတန်း အတက်မှာ အမျိုးသမီး အဖွဲ့တွေ ပေါင်းပြီး ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အမျိုးသား တော်လှန်ရေး ကျောက်တိုင် စိုက်ထူခဲ့ပါတယ်။၁၉၄၈ ခုမှာ သခင် တင်ရွှေနဲ့ အတူ တောခိုပြီး သခင် တင်ရွှေ ကျဆုံးသွားတဲ့ အခါ ဥပဒေဘောင် အတွင်း ပြန်ဝင်လာပြီး လူမှုရေး လုပ်ငန်းတွေပဲ လုပ်ကိုင် ပါတော့တယ်။ ကျောင်းဆရာမ အလုပ် ပြန်လုပ်ပြီး သား ၂ ယောက်၊ သမီး ၂ ယောက်နဲ့ အတူ ဈေးတန်း ရပ်ကွက်မှာပဲ နေထိုင်ပါတယ်။
ရပ်ကွက် စားသုံးသူ သမဝါယမ ကော်မတီ ၃ ခါ အရွေးခံရပြီး ၆ နှစ် အလုပ်ဝင်လုပ် ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့ ဆိုရှစ်လစ် လမ်းစဉ် ပါတီခေတ်မှာ မြို့နယ် တရားစီရင်ရေး နာယက၊ အသုံးလုံး လုပ်ငန်းမှာ ၁၄ တိုက်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပညာရေး အစည်းအရုံးမှာ ဥက္ကဋ္ဌ၊ နေ့ကလေးထိန်း ဖြစ်မြောက်ရေးမှာ ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ မိခင်နှင့် ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးမှာလည်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အသက် ၆ဝ မှာ ပင်စင် ယူခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းဝင် ဒုတိယအဆင့် ချီးမြှင့်ခံရပါတယ်။
စာကိုး။-- 1. ဝမ်းအိုဝမ်း ကျော်ဝင်းမောင်၏ ဂျပန်ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေး လေထီးသမားများ
2. ဗိုလ်မှူး ချစ်ကောင်းရေး အနှစ်နှစ်ဆယ် 3. သခင်တင်မြ၏ ဘုံဘဝမှာဖြင့် 4. သိန်းဖေမြင့်၏ စစ်အတွင်းခရီးသည် 5. ဒေါ်မြရီကိုယ်တိုင် ပြောပြချက်များ
Posted by leoninedragon at 2:33 AM No comments:
ကနောင်မင်း-မြင်ကွန်း မြင်းခုန်တိုင်အရေးအခင်း-- ပ...